သူနာပွု့မလေး – MM Republic
ခငျခငျလေးတဈယောကျသူနာပွုသငျတနျး ဆငျးပွီးတောရှာလေးတဈရှာမှတာဝနျကတြယျ။ အသကျကငယျငယျရုပျရညျလေးကရှိတော့အဖွူနှငျ့အနီလေးတှဲဝတျထားရငျကကျြသရရှေိလုံးဝနျးပွီးတောငျ့တငျးတဲ့တငျသားလေးက အိခြောပိုထကျသာတယျ။အှနျး တငျပဲရှိတယျ ထငျလားရငျလဲရှိတယျ။မွနျမာဝတျစုံလေးနှငျ့ဆိုမွငျသူတိုငျးခဈြကွတယျ။ဒါပမေယျ့ခငျခငျလေးမှာရျားစားသနာမရှိခဲ့ဘူး။ကွိုကျတဲ့သူတှရှေိပမေယျ့လညျးခငျခငျလေးစိတျမဝငျစားရဲဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ခငျခငျလေးမိဘကဆငျးရဲတယျ။ မိဘကပညာသငျပေးနတေဲ့အရှယျမှာ ရညျးစားသနာမြားထားခဲ့ရငျမိဘကပွောဆိုပွီးပညာဆကျသငျခှငျ့ရမှာမဟုတျလို့ပဲ။ “ကဲညီမ ညီမလေးကိုဒီရှာကလူတှနှေငျ့မိတျဆကျပေးမယျ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့ဆရာ” “ဒီနေ့ ခငျမြားတို့ရှာကိုအသဈရောကျလာတဲ့ သားဖှားဆရာမလေးပါ၊သူ့နာမညျကခငျခငျလေးတဲ့၊ဝနျထမျးအသဈတှခေပြေးတဲ့အတှကျ အဆငျမပွတောလေးတှရှေိရငျဒီရှာကရပျမိရပျဖတှကေကူညီစောငျ့ရှောကျပေးစခေငျြတယျ” “ဟုတျကဲ့ပါဆရာကွီး၊ကနြျောတို့စောငျ့ရှောကျပေးပါမယျ။
အခုတော့ဆေးပေးခနျးကဆောကျနဆေဲကာလဆိုတော့ကာဆရာမလေးကို ကနြျောတို့ရှာကသငျ့တျောတဲ့အိမျတဈအိမျမှာနရောမှာစီစဉျပေးပါ့မယျ” “ဒီကိစ်စက ဥက်ကဌကွီးတို့ကိုအားကိုးရမှာပဲ” “ရပါတယျဆရာကွီး၊ကနြျောတို့ရှာရဲ့ကနျြးမာရေးနိမျ့ကတြဲ့အခွအေနတှေတေိုးတကျလာပေါငျကြေးရှာဆေးပေးခနျးနှငျ့ဝနျထမျးခပြေးတဲ့အတှကျဆရာကွီးတို့ကိုအထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ” “ကဲဒီလိုဆိုကနြျောဥက်ကဌကွီးတို့နဲ့ကနြေျာ့ဝနျထမျးကိုစိတျခထြားခဲ့ပါမယျ” မွို့နယျဆရာဝနျကွီးပွနျသှားပွီးနောကျမှာတော့ “ဆရာမလေး ဘာမှအားမငယျနဲ့” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့” “ဆရာမလေးကို ဒျေါထားတို့အိမျမှာနရောခပြေးပါ့မယျ။ဒျေါထားတို့အိမျကကယျြလဲကယျြတယျရတှေငျးနှငျ့လညျးနီးတယျ။” “ဟုတျကဲ့ဦးသငျ့တျောအောငျစီစဉျပေးပါ” “ဒျေါထားရေ ကနြျောခငျမြားကိုတာဝနျပေးလိုကျပွီ” “အမလေးကိုရငျရယျ ကမြကဒီလိုသမီးခြောခြောလေးအိမျလာနတောကိုပဲအရမျးဝမျးသာလှပါပွီ” “လာသမီးလေး အဒျေါတို့အိမျကိုလာလိုကျခဲ့” “မငျးမငျးအောငျရနေငျ ငါ့သမီးလေးအထုတျတှသေယျခဲ့တော့” ခငျခငျလေး ကကိုကိုမငျးမငျးအောငျကိုလှမျးကွညျ့လိုကျတယျ။
တောသားဆိုပမေယျ့အသားကမမဲဘူး ရုပျရညျခပျသနျ့သနျ့လေးနှငျ့ကနျြးမာသနျစှမျးတဲ့သူမြိုး၊လို့တှေးနတေုနျး “သမီးလေး လိုအပျတာရှိရငျမငျးမငျးကိုခိုငျး အဲဒါ အဒေျါ့တူပဲ” “ဟုတျကဲ့အဒျေါ” ရှာစပျလေးမှာ ဒျေါထားရဲ့အိမျကိုလိုကျခဲ့တယျ အိမျခွံဝငျးမှာရတှေငျးလေးနှငျ့အိမျရှမှေ့ာလမျးဘေးမှာလယျကှငျးတှသေနျ့ရှငျးတဲ့လကေိုရူလို့ရတာပဲဆိုပွီခငျခငျလေးသဘောကသြှားတယျ “လာသမီးလေးသမီးလေးနမေယျ့အခနျးပွမယျ” “ဟုတျကဲ့အဒျေါ” “မငျးမငျးရေ သမီးလေးနမေယျ့အခနျးရှငျးပေးစမျးပါအုံးကှယျ” “ဟုတျကဲ့ဒျေါလေး” မငျးမငျးတဈယောကျဖငျပေါ့စှာအခနျးကိုရှငျးလငျးပေးလိုကျတယျ။အဒေျါ့အိမျနှငျ့မငျးမငျးတို့အိမျကခွံဝငျးတဝငျးထဲ။
ဆရာမလေးကလဲ အရမျးလှတော့မငျးမငျးရငျခုနျနပွေီ။ “ဆရာမလေးရေ ပွီးပွီဗြ” “အာ ကိုမငျးမငျးကလညျးဆရာမလို့မချေါပါနှငျ့ရှငျ ခငျလေးလို့ပဲချေါပါ” “ဟုတျကဲ့ခငျလေး” ခငျလေး အခနျးကိုနရောလေးခလြိုကျတယျ။ အခနျးနောကျဘကျမှာပွူတငျးပေါကျကလေးနှငျ့မို့အလငျးရောငျလေးရတယျ။ပါလာတဲ့အလှပွငျပစ်စညျးကိုနရောလေးခြ၊အိပျရာလေးခငျးပွီးလှဲခလြိုကျပွီးနားလိုကျတော့အိပျပြျောသှားတော့တယျ “ခငျလေး ခငျလေး” “ဟငျ ” “အိပျပြျောနတောလား” “ဟုတျကဲ့ကိုမငျးမငျး” “ခငျလေးရခြေိုးဖို့ကနြျောရဖွေညျ့ထားတယျ” “အားနာစရာကိုမငျးရယျ” “အားမနာနှငျ့ဗြ၊ရတှေငျးနားမှာရအေိုးရှိတယျ အဲဒီမှာခြိုးရမယျ” ခငျလေးရတှေငျးနားလှမျးကွညျ့တော့ခွောကျလုံးဝငျစဥျ့အိုးလေးနှငျ့သဈသားပွားကွီးတပွားခငျးထားတဲ့နရောလေး၊ဟငျးလငျးပွငျကွီးမှာ ခငျလေးရှကျသှားတယျ။
အဆောငျမှာနတေုနျးကရခြေိုးရငျတကိုယျလုံးခြှတျပွီးရခြေိုးခဲ့တာ အခုတော့ဟငျးလငျးပွငျကွီး “အငျးလေ သူဓလနှေ့ငျ့သူပဲလေ” “ခငျလေး ရခြေိုးရတာအဆငျမပွလေို့လား” “ဟုတျတယျကိုမငျးမငျး” “အငျးလေ ခငျလေးကအပြိုလေးဆိုတော့ရှကျနမှောပဲ” :”အဲဒီလိုမြိုးတော့မဟုတျဘူးကိုမငျးမငျး၊ခြိုးနကွေနရောမဟုတျလို့ပါ၊ကမြတို့အနနှေငျ့ရှကျတာတှကေိုခှာခပြွီးအလုပျလုပျရတာမလား” “အငျးဟုတျတယျဗြ။မမွငျဝံ့ဆေးဆရာတဲ့၊ ခငျလေးတို့အနနှေငျ့ကကတြျောတို့မမွငျဖူးတဲ့အရာတှလေညျးမွငျဖူးနမှောပဲ” “အငျးအဲတာလညျးဟုတျတယျ၊သိတဲ့အတိုငျးလေ၊ခငျလေးကသားဖှားဆရာမဆိုတော့လညျးမမွငျဝံ့တာမရှိဘူးပေါ့” “ဟုတျပါပွီ။သူမြားဟာတှမွေငျဖူးပွီးကိုယျ့အလှညျ့ကရြငျကွောကျမနနှေငျ့တော့” “ဟော့တျော ကိုမငျးမငျး” “ဟားးစတာပါဗြာ။ကနြျောရှောငျပေးပါ့မယျ”မငျးမငျးနှငျ့တှပွေီ့းခငျလေးပြျောလာတယျ။ရှာမှာတာဝနျကရြငျပငျြးနမှောလို့ထငျခဲ့ပမေယျ့ အခုတော့မပငျြးရတော့ဘူးလေ ခငျလေးရခြေိုးပွီးရငျဘတျပျေါသဘကျလှမျး ပွီးအိမျပျေါတကျခဲ့တယျ။
အခနျးထဲဝငျပွီးသနပျခါးရကွေဲလေးလိမျးကာအဝတျလဲပွီးထှကျခဲ့တယျ။ “သမီးရေ စားလို့ရပွီကှဲ့” “ဟုတျကဲ့အဒျေါ” “မငျးမငျးနငျလဲတဈခါတညျးစားလိုကျလေ” “ဟုတျကဲ့ဒျေါလေး” မငျးမငျး၊နှငျ့ဒျေါလေးတို့စားဝိုငျးကိုခငျလေးဝငျစားလိုကျတယျ။ “စားကောငျးရဲ့လား သမီး” “ကောငျးတယျ အဒျေါ” “ထမငျးစားပွီးတော့လာသမီးလကျဖကျလေးစားပွီးစကားလေးပွောကွတာပေါ့ကှယျ” “ဟုတျကဲ့အဒျေါ” “ရနှေေးကွမျးဝိုငျးလေးမှာ ခငျလေးတို့စကားပွောနကွေတယျ။ရှဈနာရီခှဲအခြိနျရောကျတော့ “သမီးလေးစကားပွောခငျြသေးရငျပွော၊အဒျေါတော့အိပျခငျြပွီ” တောဓလကေ့လူတှအေစောကွီးအိပျအစောကွီးထရတော့ဒျေါထားအိပျရာဝငျသှားပွီ။ “ခငျလေးအိပျရငျအိပျတော့လေ” “နလေ့ညျကအိပျထားတော့ခငျလေးမအိပျခငျြသေးပါဘူး” “အငျး ကိုမငျးလဲမအိပျခငျြသေးပါဘူး၊ခငျလေးမအိပျခငျြသေးဘူးဆိုရငျဆကျစကားပွောကွမယျ” “ဟုတျကဲ့ ကိုမငျး” သငျတနျးတုနျးကအတှအေ့ကွုံတှကေို ဟာသပွောဖွဈကွတယျ၊ဒီလိုနဲ့စကားပွောရငျးရငျနီးသထကျရငျးနီးလာကွတယျ။
တဖွေးဖွေးနှငျ့ခလေးမှေးတာကိုပွောပွဖွဈလာတဲ့အဆငျ့ရောကျခဲ့တယျ။ညနကျလာတော့ “အငျး ခငျလေးနှငျ့စကားသာပွောနရေရငျတညလုံးပွောဖွဈမယျ” “ဟော့တော့ ကိုမငျးအိပျရေးပကျြမယျလေ” “ကနြျောကရပါတယျဗြ၊ခငျလေးအတှကျပဲ စိတျပူတာ” “ရှငျဘာဖွဈလို့ ကိုမငျး” “ဒီလိုဗြာ မီးထှနျးပွီးစကားပွောနရေငျလမျးသှားလမျးလာတှကေခငျလေးအပျေါတမြိုးမွငျမှာစိုးလို့ပါ” “ဘယျလိုမွငျကွမှာလဲကိုမငျး” “အခုမှရောကျလာတဲ့ဆရာမလေးကို မငျးမငျးတို့ကခြိုငျနပွေီလို့လေ” “ခဈ ခဈ ခဈ” “တကယျပါကနြျောတို့တောရှာတှကေအမွငျ မကယျြသေးတော့ပွောကွသေးတယျလေ” “အငျးဒါနှငျ့ ရှာတှမှောသမီးရညျးစားတှကေစြကားဘယျလိုပွောကွလဲ” “ညဘကျပွောခငျြရငျအခြိနျးအဆကျလုပျရတာပေါ့” “ဘယျသှားပွောကွလဲ” “အဝေးကွီးမသှားဘူးလေ၊အဆငျပွရေငျအိမျနီးအနားမှာပဲပွောကွတာ”
“အငျး” “အဲဒါထကျအဆငျပွရေငျကောငျမလေးဆီမှာပဲပွောဖွဈတာပေါ့” “ခဈ ခဈ အခနျးထဲချေါပွောတာလား” “အငျးကနြျောတို့လဲကငျးစောငျ့လုပျဖူးတယျ” “ဟော့တျော ကိုမငျးမငျး” “မနကျဖွနျဘာလုပျစရာရှိလဲခငျလေး” “အငျး မနကျဖွနျ ရှာနီးစပျကရှာတှကေိုသှားခငျြတရျ။ သူတို့တှသေိအောငျလညျးပွောပွခငျြတယျ” “ကနြျောလိုကျပို့ပေးမယျ” “ကြေးဇူးပါကိုမငျးမငျး” “ဟငျးးဟငျး အခုတော့မသှားဖူးသေးဘဲနှငျ့ကြေးဇူးတငျနတောသှားကွညျ့မှကနြေျာ့ကိုအပွဈမပွောနဲ့” “ဟငျဘာလို့ကိုမငျးမငျး” “ကနြျောတို့ရှာတှကေိုသှားရငျလှညျးလမျးကွောငျးကနဆေိုငျကယျမောငျးရတာလေ။
အရမျးလမျးဆိုးတယျ” “အယျ တကယျလား” “မနကျဖွနျကရြငျသိရပွီပေါ့” “ဟုတျကိုမငျးမငျး၊စကားပွောကောငျးနတော ညတျောတျောနကျပွီ၊ကိုမငျးမငျးလဲအိပျတော့” “ခငျလေးရောအိပျတော့မလား” “အငျးအိပျမယျလေ မနကျကရြငျစောစောသှားလို့ရအောငျ” “ဟုတျပါပွီဗြာ” ခငျလေးစောစောအိပျလိုကျတယျ။ကိုမငျးမငျးရှိလို့ရှာနီးစပျတှကေိုသှားလို့ရတယျဆိုပွီးတှေးကာမငျးမငျးကိုကြေးဇူးတငျမိတယျ။ျမနကျအိပျရာကနိုးလာတော့ “သမီးလေး နိုးလာပွီလား” “ဟုတျကဲ့အဒျေါ” “ဒီမှာကောကျညငျးပေါငျးရှိတယျ။ရနှေေးလဲရှိတယျ၊ကျောဖီသောကျခငျြရငျ ကျောဖီမဈရှိတယျ။မငျးမငျးလာပို့သှားတာ” “ဟုတျကဲ့အဒျေါ” ခငျလေးမကျြနှာသဈ ပွီးကောကျညငျးပေါငျးနှငျ့ကျောဖီသောကျလိုကျတယျ။ပွီးမှသနပျခါးလိမျးကာ အဝတျအစားလဲပွီးအိမျရှကေ့စောငျ့တယျ။မငျးမငျးကဆိုငျကယျနှငျ့ရောကျလာပွီး “ခငျလေးသှားလို့ရပွီလား” “ရပွီလကေိုမငျး” “ဟေ့ မငျးမငျးဖွေးဖွေးမောငျးအုံး” “ဟုတျကဲ့ဒျေါလေး” “လာခငျလေးသှားကွရအောငျ” ခငျလေးကိုယျမငျးဆိုငျကယျနောကျကထိုငျလိုကျတယျ။
ရှာပွငျရောကျလာတော့ “ခငျလေးပွုတျကွမယျနှျော” “ဟုတျကိုမငျး” “အားမနာနဲ့ကနြေျာ့ခါးဖကျထား” “အမယျ ကိုမငျးနှျော” “တကယျပွောတာလမျးကွမျးတယျ” ခငျလေးမဝံ့မရဲဖွဈကာကိုမငျးခါးကိုဖကျလိုကျတယျ။လမျးကလညျးအရမျးဆိုးတော့ကိုမငျးခါးကိုတငျးတငျးလေးဖကျလိုကျတော့နို့တှကေကိုမငျးကြောကိုထိကပျနတေယျ။အခုလိုမြိုး ဆိုငျကယျစီးရတော့ခငျလေးစိတျထဲတမြိုးကွီးဖွဈနတေယျ။ရငျလဲခုနျတယျ။မငျးမငျးမှာမိမိကြောကိုခငျလေးရငျဘတျနှငျ့ကပျပွီးဖကျထားတော့စိတျထဲတမြိုးဖွဈလာကာလီးကတောငျလာတယျ။သာရာတဲ့အထိအတှကေ့ဖွဈလာတယျ။စိတျထဲမှာလညျးခငျးလေးကိုလိုးရရငျ အရမျးကောငျးမှာပဲလို့တှေးနပွေီး လိုးလို့ရအောငျငွံစညျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတော့တယျ။ “ရရဲ့လား ခငျလေး” “အငျး ရတယျ ကိုမငျး” မေးသူနှငျ့ဖွသေူအသံတှကေမူမမှနျတော့ပေ။နှဈယောကျသားစိတျတှဂေယောကျကယကျနှငျ့ဖွဈနပွေီ။နှဈဦးသားလညျးရိပျမိနတေယျ။
ရှာငါးရှာကိုသှားပွီးနောကျ ခငျလေးတို့ပွနျလာကွတယျ။ “ခငျလေး အဆငျပွရေဲ့လား” “အငျးလူလဲညောငျးကိုကျနပွေီ’ “ခငျလေးတော့မသိဘူး၊ကနြျောတောငျဖငျကြိမျးနပွေီ” “ခဈ ခဈ ခဈ၊ကိုမငျးကလဲ” “ခငျလေးကရော အတူတူပဲလေ” “ဟားးးးဟားးးး” ညနအေိမျရောကျတော့ “ကဲခငျလေးရနေားလိုကျအုံး၊ကနြျောညနေ မှပွနျလာတော့မယျ” “ဟုတျကိုမငျး” ခငျလေးလဲ ပငျပနျးတာမို့နားရငျးအိပျလိုကျတယျ။ညနစေောငျးမှနိုးကာရခြေိုးလိုကျတယျ။လနျးဆနျးသှားသလိုခံစားရပမေယျ့တကိုယျလုံးကိုငျရိုကျထားသလိုနာကငျြနတေယျ။ “သမီးရေ အဒျေါမှာကိစ်စပျေါလာလို့ဟိုဘကျရှာသှားရမယျ၊မငျးမငျးကို ချေါသှားလိုကျဦးမယျ” “ဟုတျကဲ့အဒျေါ” “တကယျလို့ အရေးကွီးကိစ်စကွောငျ့ပွနျမလာနိုငျရငျ မငျးမငျးအမခေျေါအိပျလိုကျနှျော” “ရပါတယျအဒျေါ” “အေးကှယျမသှားမဖွဈလို့သာသှားရမှာသမီးလေးကိုအားနာလိုကျတာ” “သှားပါအဒျေါရယျ ဘာမှနောကျဆံတငျးမနနှေငျ့” ”အေးကှယျ”ျကိုမငျးမငျးနှငျ့အဒျေါဆိုငျကယျစီးပွီးထှကျသှားတယျ။
ခငျလေးလဲထမငျးခူးခပျစားလိုကျပွီး ညခုနှဈနာရီလောကျကွာတော့မငျးမငျးရောကျလာတယျ” “ခငျလေးထမငျးစားပွီးပွီလား” “ဟုတျကိုမငျး” “နရေတာအဆငျပွရေဲ့လား” “နာနတောပေါ့၊ကြောတှခေါးတှလေဲအောငျ့နတောပဲ” “အငျးလေ စီးနမေကတြော့ဒီလိုပဲဖွဈမှာ” “အငျးပေါ့ ကိုမငျးကမဖွဈဘူးလား “မဖွဈပါဘူး” “အငျး အဒျေါရှိရငျ အဒျေါကိုခနနှိပျခိုငျးရငျရမှာ” “အာ ကိုမငျးကလညျးလူကွီးကိုအားနာစရာ” “ကနြေျာ့အဒျေါက သဘောကောငျးပါတယျ” “ဒါပမေယျ့” “ဟငျးးးကနြေျာ့အစားနှိပျပေးတယျလို့သဘောထားခိုငျးလိုကျမယျ” “အမျ ဘယျလိုဘယျလို” “ဒီလိုခငျလေး ခါတိုငျးအဒျေါနမေကောငျးရငျကနြျောနှိပျပေးနကွေလေ” “အခုခငျလေးနလေို့မကောငျးတော့ကနြေျာ့အတှကျအစားထိုးပေးနှိပျခိုငျးပေးတာပွောတာပါ” “ခဈ ခဈရပါတယျကိုမငျးရယျ” အဒျေါမရှိတော့စကားပွောရတာပိုလှတျလပျတယျ။
ပွောရငျးနှငျ့ ဆကျကိစ်စနညျးနညျးပါတယျ။ဒီတော့စိတျထဲတမြိုးလေးဖွဈပွီးအရသာရှိတယျ။မငျးမငျးသှေးတိုးစမျးပွီးရသလောကျ ထညျ့ပွောတယျ။သားဖှားဆရာမလေးဆိုတော့ဒီကိစ်စကပွောပလောကျအောငျမထူးခွားဘူးလေ။ဒါပမေယျ့နှဈယောကျတညျးပွောရတော့ခငျလေးစိတျတှလေညျးတမြိုးဖွဈနပွေီ။ စကားပွောရငျးစိတျပါလာတယျ။ပွောရငျးညနကျလာပွီ။ “ခငျလေး တဈယောကျတညျးအိပျရဲလား” “နညျးနညျးတော့ကွောကျတာပေါ့” “အကိုလာအိပျပေးရမလား” “အာ ကိုမငျးကလညျး” “ဒီလိုလုပျပါလား ၊ကနြျောတံခါးပိတျလိုကျမယျ။ညဘကျကွီးဆရာမလေးတဈယောကျတညျးကနြျောရှိနတောလူမွငျရငျမကောငျးဘူး” “အငျးဟုတျတယျကိုမငျး” “မငျးမငျးတံခါးထပိတျလိုကျတယျ” ဖယောငျးတိုငျမှိနျပွပွအောကျမှာနှဈယောကျသားရငျတှခေုနျနပွေီ။
ခငျလေးပွောရငျးကြောကအောငျ့လာလို့တခကျြဆနျ့လိုကျတယျ။ “ကြောတှအေောငျ့နတောလားခငျလေး” “အငျးတကိုယျလုံးအောငျ့နတော” “ကနြျောနှိပျပေးမယျ” “ဟငျ့ရတယျမနှိပျနဲ့ကိုမငျး၊ဆေးသောကျထားတယျ” “အားနာစရာမလိုဘူး” “ခနလေးနှိပျရမှာ” မငျးမငျးမရမကပွောလိုကျပွီးခငျလေးအနားကပျလိုကျတယျ။ခငျလေးမှာလညျးနှိပျလိုကျရငျသကျသာသှားမယျအထငျနှငျ့မို့ “အငျးကိုမငျး” “ခငျလေးမှောကျအိပျလိုကျ” “အငျး” “ခနလေးစောငျလေးနှငျ့ခေါငျးအုံးလေးယူလိုကျမယျ” ကိုမငျးအဒေျါ့အခနျးထဲကခေါငျးအုံးနှငျ့စောငျယူကာကွမျးပျေါစောငျခငျးပွီး “ရပွီခငျလေးမှောကျအိပျလိုကျ” ခငျလေးခေါငျးအုံးပျေါမှောကျခလြိုကျတယျ။မငျးမငျးလညျးဒီအခွအေနဆေိုရငျမဆိုးဘူးဆိုပွီးခငျလေးအနားကပျပွီးဒူးထောကျကာကြောပွငျကိုစမျးပွီးလကျမနှငျ့ခါးကွောကိုဖွေးဖွေးခငျြးနှိပျလိုကျတယျ။အထိအတှကေ့အိစကျညကျညောလှနျးလို့လီးကဆတျကနဲတောငျလာပွီ။ လကျမနှငျ့ခါးကွောလေးကိုခှညှပျကာဖွေးဖွေးခငျြးအပျေါအောကျဆှဲပေးလိုကျတယျ။
”အာ့ အငျးးးအငျးးး” “နာလို့လားခငျလေး နညျးနညျးလေးကိုမငျး” “အငျးကနြေျာ့မှာဆေးရှိတယျ” “အပူဆိုရငျ မခံနိုငျဘူးကိုမငျး” “အအေးဆေးရှိတယျ ခငျလေး” “အငျးကိုမငျး” ကိုမငျးဆေးဘူးကိုလှမျးယူပွီညှဈထုတျကာ ခငျလေးအကငြ်္ီ ကိုမပွီးကြောပွငျကိုပှတျလိုကျတယျ။ပွီးမှတဖွေးဖွေးလကျမလေးနှငျ့နှိပျပေးလိုကျပွီး “ခငျလေးရတယျမလား” “အငျး” ကိုမငျးလုံခညျြကိုဖွလြေော့ပွီးတငျသားနားအထိဆေးလိမျးကာပှတျပေးလိုကျတယျ။ ခငျလေးစိတျတှဝေခှေဲမရဘူး၊တဖွေးဖွေးနယျကြှံလာတဲ့ ကိုမငျးလကျတှကေ ခငျလေးလုံးခညျြကိုဖွခေနြပွေီ။အိမျနရေငျးအတှငျးခံကမဝတျထားတော့ရငျထဲတမြိုးဖွဈလာကာတငျသားနှဈဘကျအားတငျးပွီးညဈထားလိုကျတယျ။ ကိုမငျးလညျး တငျသားတှကေိုမထိတထိလုပျပွီးခငျလေးစိတျပါအောငျဆှလာတယျ။
တငျသားနှဈဘကျကိုပါလကျနှငျ့ဖိနှိပျပေးပွီးဘေးနှဈဖကျဆှဲခတြယျ။အမှနျကဖငျကွားအထိမွငျရအောငျလုပျဆောငျနတောပါ။ ခငျလေးမှာရှတေို့းရကောငျးမလားနောကျဆုတျရကောငျးမလားတှေးနတေုနျးမှာပငျကိုမငျးကခငျလေးအပျေါကခှပွီးထိုငျလိုကျတယျ။ “အာ ကိုမငျးအဲလိုမလုပျနဲ့လေ” “မဟုတျဘူးခငျလေးအကွောကိုအားညီအောငျနှိပျခငျြလို့ပါ” “အငျးပါ” ကိုမငျးတဖွေးဖွေးနှငျ့တဆငျ့တကျကာကြျောအပျေါဆေးလိမျးရနျအတှကျဘရာကိုအပျေါတှနျးတငျလိုကျတယျ။ပွီးမှကြောတပွငျလုံးဆေးလိမျးပွီးသကျညှာစှာနှိပျပေးတယျ။
ဒါပမေယျ့အပျေါတှနျးတငျတဲ့ဘရာကအောကျကိုပွနျကလြာတယျ။ကိုမငျးကဘရာဂြိတျကိုဖွုတျလျုကျတယျ။ “အာ ကိုမငျး” တဖွေးဖွေးကိုမငျးကအပျေါထိရောကျလာသလိုခငျလေးဖငျကွားကိုမငျးလီးကထောကျလာတယျ။ “လီးကွီးကခငျလေးဖငျကိုထောကျနတော ခငျလေးသိပမေယျ့မပွောရဲဘူး” ခငျလေးစိတျတှထေလာပွီးပိပိကအရညျစိုလာပွီလေ။ “ရပွီကိုမငျး” “အငျးအပျေါကတော့ရပွီ ပေါငျတှနောနမှောပဲလေ” “ရပါပွီ ကိုမငျးကလညျး” ထိုစဉျမှာပငျဖယောငျးတိုငျမီးလေးငွိမျးသှားရတယျ။ “ဟော့တော့မီးငွိမျးသှားပွီ” “အငျး ခငျလေး ကိုမငျးဒီမှာပဲအိပျတော့မယျ” “ကိုမငျးကလညျးမဖွဈပါဘူးဆို” “ဘာဖွဈလို့လဲ” “အငျးပွောတတျဘူး” “အငျးလေ မပွောနဲ့တော့ခငျလေး” ကိုမငျးခငျလေးကိုဖကျလိုကျပွီး နမျးလိုကျကာ “ကနြျောအရမျးခဈြနပွေီခငျလေး” “အို..ကိုမငျးနှျော” ခငျလေးလဲစိတျတှဂေယောငျခြောကျခွားသှားပွီး ကိုမငျးကိုပွနျဖကျထားလိုကျတယျ။
အထိအတှမှေ့ာခငျလေးတဈယောကျ ဆငျခွငျတုံတရားတှပြေောကျခဲ့ပွီးခငျလေးလညျးတဏှာရစေီးနောကျလိုကျမိခဲ့ပွီလေ။ကိုမငျးမှာခငျလေးကိုဖကျရငျးတငျသားတှကေိုပှတျပေးလိုကျတယျ။ခငျလေးနို့ရှိရာကိုအောကျသို့လြှောခပြွီးခငျလေးနို့ကိုဖွေးညှငျးစှာစို့လိုကျတယျ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ” “အာ့ အငျးဟငျးးးဟငျးးးး” တကိုယျလုံးကွကျသီးနှေးတှတေဖနျြးဖနျြးထပွီးခငျလေးအရမျးကိုစိတျတှထေလာတယျ။ နို့စို့ရငျးတငျပါးကွားလကျသှငျးပွီးအဖုတျထဲကိုလကျနှငျ့နှိုကျရာလကျထဲမှာစောကျရညျအခြို့ကပျပါလာခဲ့တယျ။ “ခငျလေးစိတျတှထေနျစပွုနပွေီမှနျး ကိုမငျး တှေးမိပွီးခငျလေးနို့ကိုပုံစံအမြိုးမြိုးနှငျ့ဖီးလျတကျအောငျစို့လိုကျပွီး ခငျလေးကိုပကျလကျလှနျကာအပျေါကနလေိုကျတယျ။ပွီးမှနို့မှတဆငျ့အောကျသို့ဆငျးကာစောကျဖုတျနရောလေးကို လြှာအပွားလိုကျနမျးလိုကျတယျ “ရှတျ..ပလပျ” “အာ့ အိုးးးအငျးးးဟငျးးးးး” တကိုယျလုံးတုနျတကျသှားကာအဖုတျထဲကအရညျတှစေိမျ့ဆငျးသှားပွီးတခါမှမခံစားဖူးသောအရသာထူးကိုခံစားမိကာခငျလေးမှာ အဖုတျထဲလြှာဝငျလာအောငျပေါငျကိုကားပွီး မွှောကျပေးမိပွနျတယျ။
“အငျးဟငျးးဟငျးးးး အားးရှီးးရှီးးး” မငျးမငျးလဲတတျစှမျးသမြှကိုခငျလေးတဈယောကျဖီးတကျလာစဖေို့ကွိုးစားပွီးလုပျပေးလိုကျရာ ခငျလေးခမြှာမကွုံဖူးသေးတဲ့ကာမရစေီးမှာမြောပါသှားတော့တယျ။ ခငျလေးတဈယောကျစိတျပါလာလို့ အျောညညျးမိသလိုကာမစိတျကအထှဋျအထိပျရောကျလို့တကွိမျပွီးသှားခဲ့တယျ။ မငျးမငျးလညျးလီးက အရမျးတောငျနပွေီလီးထိပျမှာလညျးအရညျကွညျတှစေိုနပွေီ။လီးကိုတခကျြနှဈခကျြဂှငျးတိုကျလိုကျပွီးခငျလေးအဖုတျကိုတလေို့ကျတယျ။ခငျလေးမှာကာမစိတျတှဖွေဈပွီး အလိုးခံခငျြနပွေီမို့မတားမွဈနိုငျဖွဈနပွေီ။လီးတပွေီ့း ဖိခလြာတာကွောငျ့အဖုတျထဲလီးကတငျးကွပျပွီး “ဗဈြ ဖွဈ ဗြိ ဗြိ” “အာ့ ကိုမငျး ဖွေးဖွေး” လီးတရဈခငျြးတိုးဝငျလာတယျ။အဖုတျထဲပူကနဲဖွဈသှားတဲ့အတှကျခငျလေးကိုမငျးကိုပွောလိုကျတယျ။ ကိုမငျးလညျးခငျလေးနို့ကိုကုနျးစို့ပွီးခနလေးလီးထညျ့ထားရငျးငွိမျပေးလိုကျတယျ။
ခငျလေးစောကျဖုတျကညှဈသလိုခံစားရပွီးခငျလေးလညျးညညျးလာတော့မှထပျပွီးသှငျးလိုကျတယျ။ “ဗဈြ ဗဈြ ဘှတျ ဘှတျ ဖှတျ” “အာ့အငျးးဟငျးးးအာ့ရှီးးး” အဖုတျယကျခံရတဲ့ခံစားမှု့မြိုးမဟုတျဘဲလီးဝငျလာတဲ့ခံစားခကျြကတမူထူးခွားတယျ။အဖုတျထဲဝငျလာတဲ့လီးကအဖုတျအတှငျးသားတှကေိုပှတျဆှဲသှားတော့ခငျလေးမှာအရမျးကိုကာမစိတျတကျလာစပွေီးဖီးတကျနတေော့မကျြလုံးမှိတျကာနှုတျခမျးကိုကျပွီး ညညျးတှားမိလိုကျတော့တယျ။ခငျလေးညညျးတှားသံကကိုမငျးကိုတဏှာစိတျပိုကွှလာစပွေီးလိုးခကျြတှမွေနျလာတယျ။ “ဘှတျ ဖှတျ .ဖနျးးဖနျးးးးဖနျးးး” “အာ့ရှီးးရှီးးးကိုမငျးးအာ့ရှီးးးရှီးး” “ဗဈြ ဘှတျ ဖှတျ ဖနျးးဖနျးးးးး” ခငျလေးမှာငါးမိနဈခနျ့သာအလိုးခံရပွီးနောကျပွီးခငျြလာပွနျတယျ။
“ဖှတျ ဘှတျဖပျ ဖပျ ဖနျးးးးဖနျးး” “အာ့ရှီးးရှီးးး အားးးး” “ခငျလေးပွီးတော့မလားးး” “အငျးးးကိုမငျးးအာ့ရှီးးးရှီးး” ကိုမငျးလညျးခငျလေးပွီးတော့မယျဆိုတော့အရှိနျနညျးနညျးတငျလိုကျကာထပျလိုးလိုကျတယျ။စောကျဖုတျကစေးပိုငျတငျးကွပျကာညှဈထားမှု့ကွောငျ့ကိုမငျးလဲပွီးခငျြနပွေီ။တဖတျတဘှတျဘှတျနှငျ့လိုးခကျြပွငျးပွငျးကိုအကွိမျသုံးရာနီးပါးဆကျလိုးလိုကျရာ “ဘှတျ ဖှတျဖနျးးဖနျးးးးဖနျးး” “အာ့ပွီးပွီ အားးးရှီးးရှီးးး” ကိုမငျးလညျးသုတျတှပေနျးထှကျကာပွိုငျတူပွီးသှားရတော့တယျ။မောပနျးသှားတဲ့ကိုမငျး ခငျလေးအနားကပျအိပျကာဖကျပွီးအနမျးတှေ ခွှလေိုကျတယျ။ခငျလေးလညျးကိုမငျးကိုဖကျပွီးအမောဖွနေရောကနှဈယောကျသား အိပျပြျောသှားကွပွီးမနကျလေးနာရီလောကျမှခငျလေးနိုးလာခဲ့တယျ “ကိုမငျး” “ဟငျ” “ထတော့လေ သှားတော့လူတှမွေငျကုနျမယျ” “အငျး သှားမယျခငျလေး” ကိုမငျးလဲလူးလဲထကာခငျလေးပါးကိုနမျးပွီး သူ့မိဘအိမျဘကျကိုသှားတော့တယျ။
ခငျလေးလဲညကအဖွဈအပကျြတှေးကာ တခုခုမှားသလိုခံစားမိလိုကျတယျ။ပွီးမှဖွဈသှားပွီးပွီဆိုတော့ပွငျမှမရတော့တာဟုတှေးကာ အိပျရာကထပွီးအိမျသာကိုသှားလိုကျပါသေးတယျ။ရှူးပေါကျပွီးစပျဖဉျြးဖဉျြးဖွဈတော့ စောကျဖုတျကိုရဆေေးပွီးဆေးပုံးထဲမှသန်ဓတေားဆေးယူကာသောကျလိုကျရငျးအိပျရာပျေါပွနျအိပျလိုကျတော့တယျ။ နောကျတရကျနလေ့ညျရောကျတော့အဒျေါပွနျရောကျလာတယျ။ခငျလေးလညျးဆေးခနျးရှိရာကိုသှားပွီးလုပျစရာရှိတာတှလေုပျနလေိုကျတယျ။ကိုမငျးလညျးမယောငျမလညျနှငျ့ ရောကျလာကာ “ခငျလေးအလုပျတှမြေားနလေား” “အငျးကိုမငျး” “ကိုမငျးရောအလုပျမရှိဘူးလား” “အလုပျက အဝေးကွီးမှာမှမဟုတျတာ၊အခုကပဲခငျးတှစေိုကျထားပွီးနားနတေဲ့အခြိနျလေ” “ဟုတျကိုမငျး” “ခငျလေး ညကရြငျ ခငျလေးဆီလာအိပျမလို့” “မဖွဈဘူး ဒျေါလေးရှိတယျ” “ခငျလေးကလဲအဒျေါကအိပျရငျသိုးနတော” “သိသှားမှာစိုးလို့ပါကိုမငျးရယျ” “ကိုယျ့အဒျေါအကွောငျးကို ကိုမငျးအသိဆုံးပါခငျလေး”
“မဖွဈဘူးသိသှားရငျခငျလေးပဲအရှကျကှဲရမှာ”အငျး ဒီနသေူ့ပွနျရောကျလာပွီလေ၊သူပငျပနျပမျးလို့ညကနြှိပျပေးဖို့ချေါထားတယျ” “ဟုတျလားခငျလေးရှိတာကို” “ခငျလေးကိုအားနာလို့ဖွဈမယျ” “အငျးအဲဒါဖွဈနိုငျတယျ” “ဒီလိုလုပျလေ ခငျလေးဒျေါလေးကိုညကရြငျကိုမငျး လာနှိပျပေးမယျ၊ခငျလေးကလဲဒျေါလေးကို ဆေးတိုကျလိုကျအိပျဆေးပါထညျ့တိုကျလိုကျ” “ဟှနျးဒါမြိုးဆိုတျောတျောဉာဏျကောငျးနတေယျ” “ဟီး ခငျလေးကလဲ မနကေ့ခငျလေးခရီးပနျး နလေို့ကိုမငျးအလြှော့ပေးခဲ့တာ” “ဟှနျး..တျောပါကိုမငျးရာအလြှော့မပေးရငျ ခငျလေးသသှေားမလားမသိဘူး” “မသစေရေဘူးခငျလေး” “ဒီနတေ့ော့မလာနှငျ့အုံးလေ နောကျရကျတှမှေပေါ့နှျောကိုမငျး” “ဟုတျပါပွီ ခငျလေးရာ” ခငျလေးမှာကိုမငျးနှငျ့ဖွဈပွီးတော့နောကျဆုတျလို့ရတော့မယျ့အခွအေနမေရှိတော့ပေ။ ခငျလေးလညျးမထူးတော့ဘူးဆိုပွီးကိုမငျးလိုခငျြတာပေးမလို့ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။
ဒါပမေယျ့အဒျေါအိမျမှာတော့လုပျလို့ဖွဈမယျမထငျဘူးလေ။လုပျလို့သိသှားရငျအရှကျကကှဲအုံးမှာခငျလေးကဘယျမှာအေးအေးဆေးဆေးတှလေို့ရမလဲသာစဉျးစားလိုကျတယျ။ ဆေးခနျးကဆောကျလို့ပွီးတော့မယျ။လိုအပျတဲ့ကနျြးမာရေးနှငျ့ပတျသကျတဲ့စာရှတျစာတနျးတှပေိုစတာတှေ၊ကွျောငွာတှနှေငျ့ဆေးတှလေိုအပျသေးတယျ။ဒီတော့မွို့နယျကကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနခှဲကိုဖုနျးဆကျတော့လာထုတျပါတဲ့။မွို့ကိုတကျပွီးပစ်စညျးထုတျဖို့ရာကိုမငျးကိုအကူအညီတောငျးရတော့တယျ။ “ကိုမငျး ခငျလေးမွို့တကျပွီးပစ်စညျးထုတျရမယျ” “သှားလခေငျလေးဘယျအခြိနျသှားမလဲ” “မနကျဖွနျမနကျစောစောသှားမယျ” “အငျးသှားကွတာပေါ့’” နောကျမနမေ့နကျငါးနာရီလောကျထိုးတော့ကိုမငျးကလာချေါတယျ “ခငျလေးနိူးပွီလား” “နိုးပွီလေ၊အဆငျသငျ့ပဲ” ခငျလေး အပွငျကိုထှကျပွီးကိုမငျးဆိုငျကယျနောကျလိုကျခဲ့တယျ။
ကိုမငျးလဲမွို့ဘကျမောငျးခဲ့ပွီး ကနျြးမာရေးရုံးဖကျလိုကျပို့လိုကျတယျ။ကိုးနာရီခှဲလောကျရောကျတာမို့အဆငျပွတေယျ။ရုံးကထုတျပေးတာတှကေိုခငျလေးယူလာပွီး :”ကိုမငျးတဈခုခုစားရအောငျ” “အငျးစားမယျလေ၊ဒါပမေယျ့ဆိုကျမှာမစားခငျြဘူး” “အငျးအဲဒါဆိုလဲပါဆယျဝယျလိုကျ” ကိုမငျးခေါကျဆှဲကွျောနှငျ့ထမငျးကွျောနှဈပှဲဝယျကာမွို့ကအဆငျ့မွငျ့တညျးခိုခနျးကိုမောငျးခဲ့လိုကျတယျ “အယျ ကိုမငျး ဘယျကိုမောငျးလာတာလဲ” “ခငျလေးကလဲ၊ဟိုမှာကတြော့လညျးမတှရေ့ ဘူးလေ၊အာ့ကွောငျ့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေး နမေလို့” “ဟှနျး ကိုမငျးနှျော” ကိုမငျးတညျးခိုခနျးဘကျမောငျးလာတော့ခငျလေးသိလိုကျပွီ။ လုပျဖူးထားတော့ခငျလေးစိတျကမထူးတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတျကလှမျးမိုးနတေယျ။ရှာမှာလူသိမှာစိုးရိမျရပမေယျ့မွို့မှာဆိုတော့လူတှမေသိဘူးဆိုတဲ့အတှေးကဝငျလာတယျ။ကိုမငျးနှငျ့အတူတညျးခိုခနျးထဲဝငျလိုကျတယျ။
“ခငျလေးအဝတျအစားအပိုပါလား” “မပါဘူးကိုမငျး” ကိုမငျးခငျလေးကိုဖကျပွီးနမျးလိုကျတယျ။ ခငျလေးလညျး “ကိုမငျးအဝတျတှကွေကေုနျပါ့မယျ” “ကိုမငျးခြှတျပေးမှာပေါ့” “ဟငျး..ဒါပဲအမွဲလာခြောငျးနတော” ကိုမငျးခငျလေးအဝတျတှခြှေတျပေးလိုကျတယျ။အခုလိုမြိုးထငျထငျရှားရှားမွငျရမှအရမျးကိုလှတဲ့ဘျောဒီ။နို့တှလေညျးဝိုငျးစကျလှပလှနျးတယျပနျးရောငျပွေးနတေဲ့နို့လေးတှကေလဲမွငျသူငေးလောကျတယျ။ခါးသေးရငျခြီတဲ့အလှအပမြိုးလေးပေါ့။ ခါးသေးပွီးတငျကွီးတဲ့မိနျးမသားအလှဆိုတာရှားပါးတယျလေ။ “ခငျလေးရခြေိုးခနျးဝငျလိုကျအုံးမယျကိုမငျး” ခငျလေးတမနကျလုံးလှုပျရှားနတေော့ညဈပတျနလေောကျပွီ။ကိုမငျးကတနကေ့လိုမြိုးအဖုတျကိုနမျးပေးရငျအနံ့ထှကျမှာစိုးရိမျမိတယျလေ။
ဒီတော့ရခြေိုးခနျးထဲဝငျပွီးအဖုတျလေးမှေးအောငျဆပျပွာမှေးခဲလေးနှငျ့ဆေးကွောလိုကျတယျ။ ကိုမငျးမှာခငျလေးရဲ့ဝတျလဈစလဈအလှတှပွေီ့းရငျခုနျပွီးလီးကအရမျးတောငျလာတယျ။အမှတျတရဖွဈအောငျခငျလေးမသိစဘေဲဗီဒီယိုရိုကျဖို့လုပျပွီးဖုနျးကငျမရာကိုကုတငျဖကျခြိတျပွီးဖှငျ့ထားလိုကျတယျ။ ခငျလေးမှာအဖုတျနှငျ့ဖငျကိုရဆေေးပွီးအိပျခနျးထဲပွနျဝငျခဲ့တယျ။ “လာ ခငျလေး ကိုမငျးအရမျးလုပျခငျြနပွေီ” “ဟငျ့ ကိုမငျးကလဲ” ခငျလေးနို့တှကေိုဆုပျကိုငျပွီး ခငျလေးနှုတျခမျးတှနေမျးလိုကျတယျ။ခငျလေးလဲ တုနျ့ပွနျကာနမျးတယျ။နှဈယောကျလုံးအနမျးတှကေ အရမျးကိုထနျလှနျးနတေယျ။ ကိုမငျးကနမျးရငျးနှငျ့ ခငျလေးဖငျကွီးတှကေိုညှဈသလိုခငျလေးကလညျးကိုမငျးကြောပွငျကိုတငျးကွပျစှာဖကျထားတယျ။ကိုမငျးရဲ့လီးကခငျလေးပေါငျကွားအဖုတျနရောကိုလာပွီးထောကျနတေယျ။ကိုမငျးလီးကအရညျတှကေစိမျ့ဆငျးနတောကွောငျ့ပေါငျကွားမှာခြောပွီးအဖုတျအောကျကိုထိုးမိနပွေီလေ။
ကိုမငျး ခငျလေးကိုဖကျထားရငျးအိပျရာပျေါလှခလြိုကျကာခငျလေးနို့တှကေိုရမကျထနျထနျနှငျ့တပွှတျပွှတျစို့လိုကျတယျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ”. “အာ့ အငျးးဟငျးးဟငျးးးး” တခါအလိုးခံထားတဲ့ခငျလေး အရသာကိုသိနပွေီတိုးတိတျတိတျညညျးရငျး ကိုမငျးခေါငျးကဆံပငျတှကေိုဖှဖှလေးဆှဲနမေိတယျ။ကိုမငျးလညျး အဖုတျရှိရာကိုလြှောခရြငျးခငျလေးပေါငျကိုကားကာအဖုတျကိုယကျလိုကျတော့တယျ “ပလပျ ပလပျ ပလပျ” “အာ့ရှီးးရှီးးအိုးးးကိုမငျးးးဟားးးးးအားး” ခငျလေးအသံမထှကျစဖေို့ထိနျးခြုပျပမေယျ့ ကိုမငျးရဲ့လြှာအစှမျးကွောငျ့အလြှော့ပေးကာအသံထှကျညညျးလိုကျတယျ “ပလပျ ပလပျ ပွှတျ ပွှတျ” အဖုတျယကျပွီးအစကေို့တပွှတျပွှတျစုပျလိုကျတယျ။စိတျထနျမှု့ကွောငျ့မာနတေဲ့ခငျလေးအစကေ့နီတြာရဲလေးဖွဈနပွေီလေ။ “အာ့ကြှတျ ကြှတျ အိုးးအားးရှီးးရှီးးး” ခငျလေးခါးမွှောကျပွီးအျောညညျးလိုကျသလိုကိုမငျး ခေါငျးကိုလညျးဖိခမြိတယျ။အထာပေါကျတဲ့ကိုမငျး အဖုတျထဲလြှာဝငျနိုငျသမြှဝငျအောငျထိုးမှပေေးလိုကိတဲ့အခါ ခငျလေးမှာစိတျထနျပွီး အဖုတျထဲကအရညျထှကျပွီးပွီးသှားရတော့တယျ။
“ပလပျ ပလပျ ပလပျ” “အားးရှီးးရှီးးးအားးးးးးအိုးးးအားးး” ညညျးသံဆုံးသှားတဲ့နောကျမှာတော့ခငျလေးခါးကအောကျကိုပွုတျကသြှားပွီးအသကျရှူသံလေးပွငျးပွကာမောဟိုကျသှားတော့တယျ “ခငျလေးမောသှားပွီလား” “အငျး မော သှားပွီ” “ကိုမငျး ဟာလေး နမျးပေးဦးလေ” “အငျး နမျးပေးမယျလေ” ခငျလေးကအိပျရာကလူးလဲထလိုကျသလို ကိုမငျးကအိပျရာပျေါပကျလကျအိပျလိုကျတယျ။မိုးပျေါထောငျနတေဲ့ကိုမငျးလီးကိုခငျလေးကငုံကာစုပျပေးလိုကျတော့တယျ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ” “အားးရှီးးးကောငျးလိုကျတာ အိုးး” ခငျလေးရဲ့လီးစုပျပေးမှု့ကွောငျ့ ကိုမငျးမှာခွဖေဝါးကွောတှထေောငျထသလိုဖွဈသှားရပွီး လီးကအဆမတနျတောငျလာတော့တယျ။ ခငျလေးလဲ ကွားဖူးနားဝရှိသလို လီးဒဈတှကေိုလြှာနှငျ့ရဈပတျဆှဲလိုကျတော့ “အားးရှီးးးရှီးးးကောငျးလိုကျတာ ခငျလေးရာ” “တျောပီ မလိုးရဘဲပွီးသှားလိမျ့မယျ” ကိုမငျး ပွောတာကွောငျ့ ခငျလေးလီးစုပျတာရပျလိုကျတော့တယျ။ “ခငျလေးကုနျးပေးပါလား” “အငျးကုနျးပေးမယျလေ” ခငျလေးကကုနျးပေးလိုကျတယျ။
ကိုမငျးလညျး ခငျလေးနောကျကနပွေီးအဖုတျကွားလီးတကေ့ာထိုးသှငျးလိုကျတယျ။လီးကတအိအိနှငျ့ဝငျသှားပွီးအဆုံးထိရောကျသှားတော့တယျ။ “ဗဈြ ဗဈြ ဗွိ ဗွိဗဈြ” “အာ့ကိုမငျးဖွေးဖွေးအောငျ့တယျ” “အငျးဖွေးဖွေးလေးလုပျကွညျ့မယျ” ကိုမငျးလီးကိုဖွေးဖွေးခငျြးအသှငျးအထုတျလုပျလိုကျတယျ။ခနကွာတော့ခငျလေးဆီကထှကျတဲ့အရညျကွောငျ့ခငျလေးမှာအောငျ့တာသကျသာလာသလိုဖွေးဖွေးခငျြးအသှငျးအထုတျလုပျတာလဲ အားမလိုအားမရဖွဈလာတယျ။ ဒါပမေယျ့ခငျလေးမွနျမွနျလုပျပေးဖို့ပွောမထှကျပေ။ကိုမငျးလညျးအားမရဖွဈလာကာ “ခငျလေး မွနျလို့ရပွီလား” “အငျးမွနျတော့ကိုမငျး ခငျလေးခံနိုငျပွီ” ကိုမငျးအရှိနျလေးတငျကာလိုးလိုကျတော့လီးကအဖုတျထဲတဇိဇိတဗြိဗြိ ဝငျကာဖီးတကျလာတော့တယျ။ “ဇှိ ဗြိ ဗဈြ ဘှတျ ဘှတျ ဖနျးဖနျးးး” “အာ့ အငျ့ ဟငျ့ အငျ့ ” “ဗဈြ ဘှတျ ဖှတျ..ဖနျး..ဖနျးးး” “အိုး အငျ့! ဟငျ့! အငျ့! အငျ့ အာ့ရှီးရှီးး” လိုးရတာစေးပိုငျနသေလိုအရမျးလညျးကောငျးနတေယျ။
ကိုမငျးလိုးရငျး ခငျလေးဆံပငျတှကေိုစုစညျးကာနောကျကိုလှနျဆှဲလိုကျပွီးတခကျြခငျြးဆောငျ့လိုကျတယျ။ကငျမရာမှာခငျလေးရဲ့ဖီးလျတကျနတေဲ့မကျြနှာလေးပျေါလှငျစသေလိုခါးလေးကော့ပွီးဖငျလေးထောငျနနောကွောငျ့ကိုမငျးလညျးအရသာရှိရှိလိုးရတော့ အရမျးကောငျးလှနျးသလိုခငျလေးလညျးကာမစညျးစိမျကိုပွညျ့ပွညျ့ဝဝရရှိနလေို့လိုးသံတှနှေငျ့ခငျလေးညညျးသံတှကေအခနျးတှငျးဆူညံလို့နတေယျ။ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျလိုးပွီးခြိနျမှာတော့နှဈယောကျလုံးအထှဋျအထိပျရောကျကာပွီးခငျြလာခဲ့တယျ “ဘှတျ ဖှတျ ဖနျးးဖနျးးးးး” “အာ့ရှီးးရှီးးးအားးးးအငျးးး” “ခငျလေးပွီးတော့မလား” “အငျးးပွီး…ပွီးတော့မယျ အားးရှီးးးရှီးး” ကိုမငျးလညျးခငျလေးပွီးသှားတာသိလိုကျပွီး သုတျတှပေနျးထညျ့လိုကျတော့တယျ။ “ကိုမငျးပွီးပွီလားး” “အငျးးပွီးပွီခငျလေး” “ဒါဆိုပွနျကွမယျ၊နောကျကလြို့မကောငျးဘူး” “အငျးပါနောကျအခေါကျကရြငျကွာကွာလေး လုပျခငျြတယျ” “အငျးပါကိုမငျး၊ခငျလေးရဆေေးလိုကျအုံးမယျ” “ဆေးလခေငျလေး” ခငျလေးရခြေိုးခနျးထဲဝငျသှားတော့ ကိုမငျးလညျးဖုနျးကိုယူကာပိတျလိုကျတယျ။
ပွီးမှခငျလေးနောကျကိုလိုကျပွီးရဆေေးလိုကျတော့တယျ။ဒီလိုနဲ့မွို့တကျတဲ့အခြိနျတိုငျးကိုမငျးနှငျ့ခငျလေးအမွဲတနျးလိုလို လိုးဖွဈတော့တယျ။ ခွောကျလလောကျတာဝနျထမျးဆောငျးရငျးခငျလေးမှာကိုမငျးရဲ့စရိုကျကိုသိလာတယျ။ကိုမငျးက တကယျဆိုရငျစှနျ့စားပွီးအလုပျလုပျကိုငျရမှာအခုတော့ဆယျတနျးထိပဲကြောငျးတကျဖူးပွီး အလုပျမယျမယျရရမရှိ။မိဘအလုပျကိုသာလုပျရငျးရှာမှာအေးဆေးစှာနထေိုငျတယျ။အားရငျခငျလေးဆီလာတယျ။အိပျစားကာမအဆငျ့သာရှိတယျလို့ဘဝနဲ့တှေးပွီးခငျလေးက မွငျလာတယျ။ခငျလေးတို့ရဲ့ဆေးခနျးလညျးပွီးစီးလို့ခငျလေးအိမျပွောငျးလိုကျတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ခငျလေးလညျးကိုမငျးကိုတဖွေးဖွေးနှငျ့ဝေးလာတော့တယျ။ဆေးခနျးမှာလညျးနောကျထပျတဈယောကျရောကျလာတဲ့အခါခငျလေးမှာအဖျောရှိလာတော့ကိုမငျးကိုလညျး ရှောငျနမေိတယျ။ဒီလိုနှငျ့တနကွေ့တော့ရှာမှာအလှူတဈခုကခငျလေးကိုဖိတျတယျ။
ခငျလေးနှငျ့အဖျောအလှူကိုသှားကွတယျ။ အလှူကလဲရှာကမကျြနှာဖုံးဆိုတော့လူလညျးစညျတယျ “ဟေ့..မောငျလေး ဆရာမလေးတှလောတယျ” “ဟုတျမမကွီး” “ဆရာမလေးတှလောဗြ။ထိုငျကွပါ” “မောငျလေးရေ ဆရာမလေးတှကေိုဧညျ့ခံလိုကျဦး၊မမလာခဲ့မယျ”ခငျလေးကလာပွီးဧညျ့ခံတဲ့လူကိုကွညျ့လိုကျတော့ခငျလေးထကျသုံးနှဈလောကျကွီးမယျ့လူ ပါ။အသားညိုညိုနှငျ့ကိုယျခန်ဓာတောငျ့တငျးတဲ့လူငယျတဈယောကျပေါ့” “ဆရာမလေးတို့စားကွပါ” “မမလညျးလာနပွေီ” “ဆရာမလေး စားနှျောအားမနာနှငျ့၊ဒါကမြ မောငျလေးအငယျဆုံး” “ဟုတျမမ ၊အရငျကမတှမေိ့ဘူးနှျောရှာမှာ” “အခုမှနိုငျငံခွားကပွနျလာတာကှယျ၊မသှားနဲ့အိမျကအလုပျတှလေုပျပါဆိုတာမရဘူး၊သုံးနှဈလောကျစငျကာပူမှာလုပျပွီးပွနျလာတာ” “ကဲမောငျလေး၊သူကမခငျခငျလေးတဲ့” “ဟုတျကဲ့ ကနြျောကကြျောကြျောထှနျးပါ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့တှရေ့တာဝမျးသာပါတယျ” “ကနြျောလညျးဝမျးသာပါတယျ” ကြျောကြျောထှနျးဆရာမလေးခငျခငျလေးကို သဘောကသြှားတယျ။
အရမျးလှလို့စိတျဝငျစားမိတယျ။ခနခန ဆရာမလေးကိုခြောငျးကွညျ့မိတယျ။ခငျလေးမှာကိုကြျောကြျောထှနျးနှငျ့အကွညျ့ဆုံပွီးရငျထဲတမြိုးဖွဈသှားတယျ။ “ခငျလေး ကနြျောတို့အိမျကိုလာလညျနိုငျပါတယျဗြ” “ဟုတျ ကဲ့ကိုကြျောကြျောထှနျး ကမြတို့ဆေးခနျးဖကျလဲလာလညျနိုငျပါတယျ” “လိုတာရှိရငျပွောပါ။ကနြျောစှမျးသလောကျ ကူညီပါ့မယျ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့” ခငျလေးမှာကိုကြျောကြျောထှနျးရဲ့ပှငျ့လငျးတဲ့အပွောနှငျ့အပွုံးကိုသဘောကသြှားတယျ အကွညျ့စူးစူးတှကွေောငျ့ရငျခုနျသလိုဖွဈလာတယျ။ကိုမငျးနဲ့တှတေဲ့ခံစားမှု့မြိုးမဟုတျဘဲထူးဆနျးတဲ့ခံစားမှု့မြိုးကိုကွုံရတယျ “အငျး ငါဘာလို့ဒီလိုတှဖွေဈမိတာလဲမသိဘူး” စားသောကျပွီး တော့ “ကိုကြျောကြျောထှနျး ကမြတို့ပွနျတော့မယျ ဆေးခနျးမှာလူမရှိလို့” “ဟုတျကဲ့ပါဗြ” “မမ ညီမလေးတို့ပွနျတော့မယျ” “အေးကှယျ ဆရာမလေး” “မောငျလေးရေ အသီးအနှံတှထေညျ့ပေးလိုကျပါကှယျ” “မမရေ မယူတော့ဘူးလေ၊အလှူကွီးမှာ” “အေးကှယျ ညနကေမြှမောငျလေးကိုလိုကျပို့ခိုငျးတော့မယျ’”
“ရပါတယျမမရဲ့” “အမလေးကှယျ အားနာစရာကနြတောပဲ၊ကဲ ပွနျပွနျ နောကျကနြမေယျ” ခငျလေးအလှူအိမျကပွနျလာလိုကျတယျ။ အပွနျလမျးတဈလြောကျကိုကြျောကြျောထှနျးရဲ့မကျြနှာပဲမွငျယောငျမိပွီးပွုံးမိတယျ။ “အမယျခငျလေးဘာတှပွေုံးနတော” “ဟုတျပါဘူး အမရယျ” “ဟငျးဟငျးးးငါသိပါတယျအေ ၊ကိုကြျောကြျောထှနျးကွောငျ့မလား” “အို အမကလဲ” “အငျး ခငျလေးခငျလေး ငရံ့နှဈကောငျကွောငျ့ဘယျအကောငျဖမျးရမလဲစဉျးစားရခကျနပွေီထငျတယျ” “အာအမရယျ အဲဒီလိုမဟုတျပါဘူး” ခငျလေးဘယျလိုပငျငွငျးပါစေ ခငျလေးဘာသာအသိဆုံးပါပဲ။ခငျလေးကိုကြျောကြျောထှနျးတို့ရဲ့မိသားစုအမူအကငျြ့ကိုသိတယျ။အကယျ၍ အိမျထောငျဖကျအဖွဈရှေးခယျြရငျငွငျးရကျစရာ လူမြိုးမဟုတျဘူးလေ။ဒါပမေယျ့အခုတော့ခငျလေးမှာ ကိုမငျးကရှိနပွေီ။ကိုမငျးလိုလူမြိုးနှငျ့တော့အိမျကသဘောမတူဘူးလို့အရိပျအမှတျပွောထားပွီးပွီ။ခငျလေးတှေးရငျပွုံးလိုကျတယျ “မုနျ့ဆီကွျောကဘယျနမှေနျးမသိဘူး၊နှုတျခမျးနာနှငျ့တညျ့ပါ့မလားဆိုပွီးတော့လေ” ညနရေောကျတော့ကိုကြျောကြျောထှနျးရောကျလာတယျ။
“ခငျလေး ၊ ဟိုမှာကိုကြျောကြျောထှနျး” “အယျ ကိုကြျောကြျောထှနျးအားနာစရာရှငျ” “အားနာစရာမလိုပါဘူးဗြာ၊ကနြျောကိုယျတိုငျကလာခငျြနတော” “ဟော့တော့” “မအံ့ဩနဲ့လေ ကနြျော ကခငျလေးမွငျပွီးကတညျးကလာခငျြနတော” “အျောကိုကြျောကြျောထှနျးရယျ” “ရော့ အမပေးလိုကျတဲ့အသီးအနံတှေ လတျ ဆတျတယျဗြ” “ကြေးဇူးပါရှငျ” “လုပျပွနျပွီ၊ကနြျောတို့ရှာကိုကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု့တှလေုပျပေးတဲ့ခငျလေးကိုကနြျောတို့ကကြေးဇူးတငျရမှာပါ” “အမယျကိုကြျောကြျောထှနျးအပွောကောငျးတယျ” “မကောငျးပါဘူးဗြာ” “ကမြဘာကြှေးရမလဲ၊အပွောကောငျးလှနျးလို့” “မလိုပါဘူးဗြာ၊ဒါပမေယျ့ဒီကိုခဏခဏတော့လာခှငျ့ပေးပါ” “ရှငျ ဘာလုပျမို့လဲရှငျ့” “ကနြေျာ့ရငျထဲခံစားခကျြတှဖှေငျ့ပွမလို့” “အမျ ကိုကြျောကြျောထှနျးနှျော” “ဘာလဲခငျလေးက မယုံလို့လား၊လူကွီးစုံရာနှငျ့လာတောငျးပွမယျလေ” “ဟော့တျော ဒုက်ခပါပဲ” “ဘာမှဒုက်ခမရောကျစရေဘူး၊တောသားဆိုပမေယျ့အရညျအခငျြးရှိပါတယျ။
ခငျလေးကိုဝမျးဝရုံမကစိတျခမျြးသာအောငျထားနိုငျတယျ” “ဟော့တျော ကိုကြျောကြျောထှနျးကွီးနှျော” “ဟုတျတယျခငျလေးမွငျမွငျခငျြးခဈြတယျဆိုတာ ရူးတဲ့လူတှလေို့ထငျခဲ့တာအခုကနြျောအရူးဖွဈနပွေီ” “ခဈ ခဈ ခဈ” “ရယျပါဗြာ၊ရယျပါ။ ခငျလေးတဈသကျလုံး စိတျခမျြးခမျြးသာသာနှငျ့ရယျနိုငျအောငျခငျလေးကိုလကျထပျခငျြပါတယျ” “ခငျလေးစဉျးစားပါရစေ ကိုကြျောကြျောထှနျး” ခငျလေးမှာတကယျတမျးအခဈြဆိုတာကိုတှလေို့ကျရတဲ့အခြိနျကြူးလှနျခဲ့တဲ့အမှားတဈ ခုကွောငျ့ခငျလေးစိတျညဈမိတယျ။တခြိနျကမတှေးမိဘဲကိုမငျးနှငျ့သာယာခဲ့တာအမှားတဈခုလိုထငျနရေပွီလေ။ဆေးခနျးကထှကျသှားတဲ့ ကိုကြျောကြျောထှနျးကြောပွငျလေးကိုကွညျ့ပွီးခငျလေးသကျပွငျးခလြိုကျတယျ “ဟူးး…ကိုကြျောကြျောထှနျးရယျ၊အစကသာတှခေဲ့ရငျ ခငျလေးရငျမောရမှာမဟုတျဘူး” ကိုကြျောကြျောထှနျးဆေးခနျးကထှကျသှားပွီး နောကျကိုမငျးရောကျလာကာ “ကြျောကြျောထှနျးဘာလာလုပျတာလဲခငျလေး” “အသီးအနှံတှလောပို့တာ” “အော .”တခကျြသာအသံထှကျလိုကျပွီးကိုမငျး စဉျးစားလိုကျတယျ။ပွီးမှ “ဘာတှပွေောသှားတာလဲ”ူး”ဘာမှမပွောဘူး” ဒီကိစ်စမြိုးဆိုတာမွှမွှေခေငျြးခွမွေငျတယျ။
ဒီကောငျလိုလူမြိုးကစိတျထဲကမပါဘဲဒီလိုဆေးခနျးလာစရာမရှိဘူး၊။ငယျကတညျးကသိပွီးသားလေ။ကြျောကြျောထှနျးလိုလူမြိုးက ဘယျမိနျးကလေးမှစိတျဝငျစားခဲ့တာမဟုတျဘူး။စီးပှားရေးပွလေညျပမေယျ့ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါရပျတညျမယျဆိုပွီး စငျကာပူကိုထှကျသှားတာ။ အခုဆေးခနျးကိုလာတယျဆိုတော့ခငျလေးကိုဒီကောငျကွိုကျလို့ဖွဈမယျ “ခငျလေးညနဘောစားမလဲ” “အားလုံးစီစဉျပွီးပွီ” “ဒီညလာတှလေို့ရမလား” “မရဘူးဆို” “ခငျလေးရယျ ကိုမငျးအရမျးတှခေ့ငျြနတော” “ကိုမငျးရယျခငျလေးဘကျလဲကွညျ့အုံးလေ” “ဟငျးးး ခငျလေးရယျ၊ကိုမငျးစိတျမခဘြူးကှာ” “အမျ ကိုမငျးနှျော ပွနျတော့ခငျလေးလုပျစရာရှိသေးတယျ” ကိုမငျးအနှငျခံရတော့စိတျခုသှားတယျ။ အမှနျကခါတိုငျးလဲဒီလိုပါဘဲ။ဒါပမေယျ့ကြျောကြျောထှနျးလာပွီးကတညျးက ကိုမငျးစိတျတှတေိုနမေိတယျ။ဆကျပွောရငျစိတျတိုရမှာမို့ကိုမငျးအိမျပွနျလိုကျတယျ။
ခငျလေးလဲကိုမငျး ပွနျသှားတော့သကျပွငျးလေးခလြိုကျမိတယျ။ ဖုနျးမညျသံကွားလို့ ခငျလေးထကိုငျလိုကျတော့ကနျြးမာရေးရုံးက “ဆရာမ ခငျလေး” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့” “ဆရာမလေးမွို့ကိုပွောငျးရမယျ” “ရှငျ” “ဟုတျတယျဗြ၊အျောဒါထှကျနပွေီ” “ဟုတျကဲ့ရှငျ့” ခငျလေးထှကျပေါကျတဈခုရသလိုခံစားရပွီး ပြျောသှားတယျ။မနကျမိုးလငျးတော့ရှာကလူတှကေိုနှုတျဆကျတယျ။အားလုံးကမွို့ပျေါပွောငျးရတော့စိတျမကောငျးကွပမေယျ့တှလေို့ရနတောမို့အဆငျပွသေေးတယျဆိုပွီးလိုကျပို့ကွတယျ။ကိုမငျးကိုယျတိုငျလိုကျပို့ပါတယျ။မွို့ရောကျတော့ကိုကြျောကြျောထှနျးဖုနျးဆကျတယျ “ခငျလေး” “ရှငျ ကိုကြျောကြျောထှနျး” “ကနြျောမှာခငျလေးနဲ့တှလေို့ပြျောရုံပဲရှိသေးတယျခငျလေးကပွောငျးရပွီဆိုတော့ကနြေျာ့ ရှာမှာမပြျောဘူးဗြာ” “အျောကိုကြျောကြျောထှနျးရယျ” “ကနြျောခငျလေးကိုခဈြတယျဗြာ” “ခငျလေးသိပါတယျ” “ခငျလေး ကနြျောကိုလကျထပျပါလားဗြာ” “ဟငျး ကိုကြျောကြျောထှနျးရယျ” ” ကမြ..မိဘတှကေိုပွောရအုံးမယျ၊ သူတို့သဘောတူမှဖွဈမှာပါ”
“ဟာဒီလိုဆို ခငျလေးကနြေျာ့မမကိုအဲဒီလှတျပွီးအကြိုးအကွောငျးပွောပွခိုငျးလိုကျမယျဗြာ” “ဟုတျကဲ့ကိုကြျောကြျောထှနျး” “ကနြျောအရမျးပြျောသှားပွီဗြာ၊မနကျဖွနျခငျလေးဆီလာခဲ့မယျ” “ဟုတျ ကဲ့” ကြျောကြျောထှနျးကသူ့အမကွီးကိုပွောတော့ “ငါ့မောငျ မမကွီးကမိနျးကလေးခငျြး ကိုယျခငျြးစာလို့သိပျမပွောခငျြဘူး” “ဘာဖွဈလို့လဲမမ” “ဘာဖွဈရမလဲ မငျးမငျးနဲ့သူသမီးရညျးစား ဖွဈနတေယျလို့သတငျးကွားတယျ’ “မမကလညျးဗြာ၊ခုခတျေမှာသမီးရညျးစားတှဘောတှကေအရေးမကွီးဘူးလေ” “ငါ့မောငျ…အိမျထောငျပွု၊ဘုရားတညျ၊ဆေးမှငျရညျစုတျထိုး၊ခကျြမပိုငျပွငျရခကျသညျ့အမြိုးတဲ့။မောငျလေးသတိထားရမှာနှျော နောငျပျေါလာမယျ့ပွသနာအတှကျမောငျလေးစဉျးစားအုံး” “မမရယျ လူတိုငျးကခွောကျပဈကငျးသဲလဲစငျဆိုတာမရှိဘူး၊ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကနြျောခဈြလို့လကျထပျမှာပါ” “အေးပါ မမသတငျးမေးမွနျးကွညျ့ပါမယျ” မောငျကိုခဈြသညျ့အမမို့မောငျပွောသလိုပဲ ခငျလေးတို့ရှာကိုခရီးထှကျသှားတယျ။
ကိုမငျးတို့ရှာဆိုတာတဈဦးကတဈခုခုလုပျရငျ တဦးကသိနတေော့ ကိုမငျးစိတျထဲမနနေိုငျမထိုငျနိုငျဖွဈရပွီ။ ရညျးစားလူလုအူနုကြှဲခတျဆိုသလိုပါပဲ။ကြျောကြျောထှနျးဆီသှားလိုကျပွီး “ကြျောကြျော” “ဘာလဲမငျးမငျး” “အေး ငါနှငျ့ခငျလေးကသမီးရညျးစားဖွဈခဲ့တယျနှျော” “အေးဖွဈလဲဘာဖွဈလဲကှာ၊ငါလကျထကျမဖွဈရငျပွီးတာပဲ” “မငျးစဉျးစားလေ ငါထကျသာတဲ့မငျးနှငျ့တှတေ့ော့ငါ့ကိုပဈပွီးမငျးနောကျလိုကျတာ။ဘယျမှာလဲသစ်စာ” “အငျး..လေ သူလဲသူ့အကွောငျးတရားနှငျ့သူမို့လို့လေ” “အေးမငျးကို ငါမပွောမရှိနှငျ့။တဈရှာတညျးသားမို့ပွောပွတာ” “အေးငါသိပွီးပွီ” “ငါနှငျ့ဘယျအဆငျ့ထိရောကျခဲ့လဲမငျးသိလား” “ဒါတှငေါသိစရာမလိုဘူး၊ငါနှငျ့လကျထပျပွီး ငါကွညျဖွူရငျပွီးတာပဲ” “အေးပါကှာ၊မငျးသိအောငျငါလာပွောတာပါ” “အေးပါကြေးဇူးပဲ” ကိုမငျး ကြျောကြျောထှနျးကိုအံ့ဩသငျ့သှားတယျ။ဒီလောကျထိရူးလိမျ့မယျလို့ မထငျမှတျခဲ့ဘူး။
သူ့ထိုကျနှငျ့သူ့ကံလို့ပဲတှေးလိုကျတော့တယျ။ ကြျောကြျောထှနျး ခငျလေးပိတျရကျမို့ဆီသှားလိုကျတယျ။ “လာလေ ကိုကြျောကြျော” “အငျး ခငျလေးနှငျ့အေးအေးဆေးဆေးစကားပွောခငျြတယျ” “ပွောလေ ကိုကြျော” “ကိုကြေျာ့သူငယျခငျြးအိမျကိုသှားမယျ” “အငျး လိုကျခဲ့မယျကိုကြျော” ကြျောကြျောထှနျးခငျလေးနှငျ့စကားကိုလှတျလပျစှာပွောဖို့ရာသူငယျခငျြးအိမျချေါခဲ့တယျ “ဟကေ့ောငျကြျောကွီးအခုမှလာတယျ” “အေးကှာ ဒါ ငါယူမယျ့မိနျးကလေးခငျလေးတဲ့” “အော မခငျလေးဘာမှအားမနာနှငျ့ဒီကောငျနဲ့ကငယျသူငယျခငျြးတှေ၊အခုကဒီအိမျမှာကနြျောတဈယောကျတညျးအေးဆေးနေ” “ဟကေ့ောငျကြျောကွီးငါအပွငျလဈမယျ၊မငျးပွနျခါနီးမှဖုနျးဆကျတော့” “အိုကေ သူငယျခငျြး” ကြျောကြျောထှနျးသူငယျခငျြးအပွငျရှောငျထှကျသှားမှ “ခငျလေး ကိုမေးစရာရှိတယျ” “မေးလေ ကိုကြျော” “ခငျလေးကိုယျ့ကိုခဈြလား” “ဘာလို့ဒီစကားမေးတာလဲကိုကြျော” “အကွောငျးရှိလို့” “အငျးဘယျလိုပွောရမလဲဆိုရငျ၊ခငျလေးကို ကြျောနှငျ့လကျထပျဖို့အထိတှေးထားတာ၊ကိုကြေျာ့ကိုခဈြမိလို့ပဲ”
“ခငျလေးကိုကနြျောခဈြတယျ” “ဟုတျကဲ့” “ခငျလေးခဈြတယျလို့ဖွပေေးလေ” “ဟုတျပါပွီရှငျ ကမြလဲရှငျ့ကိုခဈြပါတယျ” “ခငျလေးကို ပွောစရာရှိတာကခငျလေးဘာတှပေဲဖွဈခဲ့ဖွဈခဲ့ ကနြျောကွညျဖွူတယျ” “အငျး ကိုကြျော ခငျလေးကိုမေးခငျြတာတှေ ရှိတယျမလား” “အငျး ” “ခငျလေးသိပါတယျ” “အငျးပွောပွလို့ရမလား” “ခငျလေး ကိုမငျးမငျးနှငျ့ညိစှနျးခဲ့တယျ” “အငျး ရပွီခငျလေးရပွီ” “ကိုကြေျာ့အခဈြကို ယုံတယျမလား” “အငျးယုံတယျလေ” “အငျးကိုယျလေးခငျလေးကိုလညျးယုံပါတယျ” “ဟုတျကိုကြျော” “ခငျလေးအရမျးခဈြတယျကှာ” ကိုကြျော ခငျလေးကိုဖကျပွီးနမျးလိုကျတော့။ ခငျလေးလဲပွနျနမျးလိုကျတယျ။ခငျလေး မှာကြျောကြျောထှနျးအနမျးတှတေုနျ့ပွနျရငျး ကနြေပျမိတယျ။တဘဝစာအားကိုးရမယျ့လူ မိမိခဈြရတဲ့သူ၊မိမိအပျေါနားလညျခှငျ့လှတျပွီးခဈြရမယျ့သူဆိုတာမို့ခငျလေးအရမျးပဲကနြေပျမိတယျ။ကြျောကြျောထှနျးခငျလေးကိုအရမျးခဈြတယျ။တူနှဈကိုယျသစ်စာပွိုငျဆိုလိုကျခငျြသေးတယျ။မငျးမငျးကခငျလေးအနားကပျမရတော့အောငျ ခငျလေးကိုအနိုငျယူခဲ့ခငျြတာကွောငျ့ခဈြလေးကို လိုးဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ ခငျလေးအကငြ်္ီကိုအသာအယာလေးခြှတျလိုကျပွီးခငျလေးဘရာကိုပါခြှတျယူခလြိုကျပွီးဝိုငျးစကျပွီးအလှနျလှတဲ့ခငျလေးရဲ့နို့တှကေိုတပွှတျပွှတျစို့ လိုကျတယျ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ” “အာ့ရှီး ကိုကို အငျး..ဟငျးးဟငျးးး” ခငျလေးစိတျတှထေကွှနပွေီ။ဒီတဈခါ ကိုကိုလိုးရမယျ့အရေးကစိတျခလြုံခွုံသလိုခံစားနရေတယျ။
စိတျလဲရဲမိတယျ။နို့ခြိုခြိုတှကေိုစို့နတေဲ့ကိုကိုကွောငျ့ စိတျထိနျးမထားပဲညညျးတှားမိလိုကျတယျ။ကိုကြျောလညျး ခငျလေးရဲနို့ထှားထှားတှကေို စို့ရငျးလကျကစောကျဖုတျမှေးတှကေိုဖှဖှလေး ဆှဲလိုကျတယျ။ “အာ့ ကို ကို အငျးးးဟငျးးး”နာကငျြမှူ့လေးနှငျ့အတူကာမစိတျတှတေအားတိုးပွီးကိုကို့လညျးပငျးကိုခငျလေးဆှဲဖကျလိုကျသလိုပိပိထဲအရညျတှစေီးဆငျးသှားရပွနျတယျ။ကြျောကြျောထှနျးလညျးခငျလေးစောကျဖုတျအကှဲကွောငျးထဲအရညျကိုလကျနှငျ့ကလျောကာအစကေ့လေးကိုပှတျပေးလိုကျတယျ “အာ့ရြီးးးရှီး အိုး ကိုကိုရယျ ” တစတစတိုးပှားနတေဲ့ကာမစိတျကွောငျ့ခငျလေးညညျးသံပိုထှကျလာတယျ။အစကေို့ပှတျခံရတဲ့ခငျလေးနမေထိထိုငျမသာဖွဈနပွေီးပွီးထငျြစိတျတှဖွေဈနပွေီ။အလိုးခဲခငျြနပွေီ။
ကြျောကြျောထှနျးခငျလေးစောကျဖုတျကိုအားရပါးရနမျးရှိုကျလိုကျပွီးစောကျဖုတျအကှဲကွောငျးတလြောကျလြှာကိုအပွားလိုကျလုပျကာယကျလိုကျတယျ။ “ပလပျ ပလပျ ပလပျ” “အားးရှီးးးအိုး ကိုကို မလုပျနဲ့ အားး”ကွိုကျပမေယျ့ဟနျဆောငျပွီးတားလိုကျတယျ။ ကြျောကြျောထှနျးကတော့ခငျလေးအပျေါမှာမငျးမငျးထကျငါပိုစှမျးဆောငျနိုငျတယျဆိုတာသကျသပွေရအောငျ ကွိုးစားပွီးတတျကြှမျးသမြှကာမပညာကိုအသုံးခကြာလြှာကိုစုခြှနျပွီးထိုးမှလေိုကျတယျ။ပွီးမှအစကေ့လေးကိုတပွှတျပွှတျစုပျတယျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ” “အာ့ရှီးးရှီးးးရှီးးအိုးး ကိုကိုအိုးးးးးအားးရှီးး” အစကေ့လေးစုပျရငျးစောကျဖွတျကိုလကျခလယျနှငျ့အဝငျအထှကျကွမျးကွမျးလုပျလိုကျတယျ။
ခငျလေးလညျးကာမစိတျတှအေရမျးကွှလာကာခါးလေးကိုလပေျေါမွှောကျပွီးအရသာယူလိုကျတယျ။ကိုကိုရဲ့စုပျပေးယကျပေးမှု့ကွောငျ့ခငျလေးကွာကွာမထိနျးနိုငျတော့ပဲခငျလေးမှာ ပွီးသှားရတော့တယျ။ “ခငျလေးကိုကိုလိုးခငျြနပွေီ” “ကိုကို့သဘောပါ ကိုကို” “ကိုကို့သဘောဆိုရငျကိုကိုလီးစုပျခိုငျးလို့ရမလားဟငျခငျလေး ကိုကိုလဲလီးစုပျခံခငျြတယျ” “ကိုကိုလုပျပေးပါဆိုရငျခငျလေးအသငျ့ပါပဲကိုကို” “အငျးဒါဆို ကိုကိုလီးစုပျပေး” ကြျောကြျောထှနျးမတျတပျရပျကလေးနှငျ့နပေေးတော့ခငျလေးကိုကိုနားဒူးထောကျလိုကျကာကိုကိုလီးကိုစုပျလိုကျတယျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ” “အားးးးးရှီးးးအိုးးကောငျးလိုကျတာခငျလေးရာ” အတှအေ့ကွုံရှိးပွီးသားမို့ခငျလေးအတှကျမခကျခဲလှဘူး။လီးကိုအဆုံးထိဝငျနိုငျသမြှဝငျအောငျသဒ်ဓါပိုစှာလုပျပေးလိုကျတယျ။ခငျလေးလီးစုပျခကျြကွောငျ့စိတျပါနတေဲ့ကြျောကြျောထှနျးပွီးမသှားရအောငျစိတျအာရုံကိုတနရောပို့လိုကျရတယျ။
လီးထိပျဝလေးတှကေိုလြှာဖြားလေးနှငျ့ထိုးဆှပေးတော့ ကြျောကြျောထှနျး ရငျတှတေသိနျ့သိမျ့တုနျစတေယျ။လီးဒဈကွီးကိုလြှာဖြားနှငျ့ရဈပတျဆှဲရုံမက လီးအရငျးကိုပါလြှာနှငျ့ယကျလိုကျသေးတယျ။ဂှေးဥလေးကိုပါမနာမကငျြစပေဲလပျနှငျ့ညှဈပေးပွီးစုပျဆှဲလိုကျရာ “အားးရှီးးးရှီးးးအိုးးခငျလေးကိုကို မရတော့ဘူးပွီးသှားမယျ” “ဟုတျကိုကို” “ခငျလေးကိုလိုးခငျြနပွေီ” ”ကိုကိုသဘောပါကိုကို” “လာခငျလေးကုတငျပျေါပကျလကျလှနျလိုကျကိုကိုအောကျကနမေတျတပျလိုးမယျ” ခငျလေးကိုကိုပွောသလိုကုတငျပျေါထိုငျနရောကကုတငျအောကျခွဆေငျးလိုကျပွီးပကျလကျလှနျခလြိုကျတယျ။ကြျောကြျောထှနျးလဲကုတငျအောကျကနပွေီးခငျလေးပေါငျကိုတှနျးတငျကာစောကျဖုတျထဲလီးတပွေီ့းလိုးလိုကျကာ ခငျလေးပေါငျနှဈခြောငျးကိုပုခုံးပျေါတငျပွီး တဖတျဖတျလိုးလိုကျရာလီးကလညျးအတားအဆီးမရှိပမေယျ့ကွပျတညျးပွီးတဇှိဇှိ တဖှတျဖှတျဝငျသှားတော့တယျ “ဗဈြ ဘှတျ ဖှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ” ‘”အာ့ရှီးးအိုးးအငျးးဟငျးးးဟငျးး” “ဘှတျ ဖှတျ ဖနျးးဖနျးးဖနျးးးဖနျးးး” “အာ့ အိုးးအားးးရှီးးရှီးးးးအိုးး” ကိုမငျးနှငျ့လိုးရတာနှငျ့မတူသောအရာတမြိုးကိုခံစားလိုကျရတယျ။ဂှေးဥကတဖတျဖတျနှငျ့ခငျလေးဖငျကိုရိုကျမိနတေယျ။
ခံစားရတဲ့အထိအတှကွေ့ောငျ့ခငျလေးလညျးအရမျးအရသာရှိနတေယျ။ကြျောကြျောထှနျးလညျးခငျလေးစောကျဖုတျလိုးရသဖွငျ့စိတျတှအေရမျးကွှကာနညျးနညျးကွမျးပွီးလိုးလိုကျတယျ။ထိနျးထားတဲ့စိတျတှကေိုလှတျလိုကျမိသဖွငျ့ဆယျမိနဈလောကျလိုးလိုကျတဲ့အခါမှာ “အားးရှီးးရှိးးးအိုးးးအားးး” ခငျလေးစောကျဖုတျရဲ့ညှဈအားကိုခံစားလာရပွီးခငျလေးပွီးတော့မယျဆိုတာကိုသိလိုကျရတဲ့အတှကျကြျောကြျောထှနျးလဲသုတျမထိနျးပဲလိုးလိုကျရာနှဈယောကျသားပွိုငျတူပွီးသှားတော့တယျ။ ခငျလေးစောကျဖုတျထဲလီးရညျနှေးနှေးတှဝေငျရောကျသှားတော့ကိုကိုပွီးသှားမှနျး ခငျလေးသိလိုကျတယျ။ “ကိုကို ပွီးသှားပွီလား” “အငျး ခငျလေး” “ခငျလေးအိပျထဲကတဈရှူးလေးပေးပါကိုကို” ကြျောကြျောထှနျးလဲခငျလေးအိပျထဲကတဈရှူး စက်ကူလေးယူပေးလိုကျတယျ။ခငျလေးကတဈရှူးစယူပွီးစောကျဖုတျကိုသုတျတယျပွီးမှ “ကိုကိုလာလေ ညဈပတျနပွေီခငျလေးသုတျ ပေးမယျ”ကြျောကြျောထှနျးလဲခငျလေးအနားကပျပေးလိုကျတော့ခငျလေးကလီးကိုယုယစှာသနျ့ရှငျးပေးလိုကျတယျ။
“ပွီးပွီ ကိုကို” ခငျလေးကမော့ပွီးပွောတော့ကြျောကြျောထှနျးလဲခငျလေးနဖူးလေးအားနမျးလိုကျပွီးဖကျထားလိုကျတယျ “ကိုကို တျောပွီကှာ၊ကိုကိုသူငယျခငျြးအားနာစရာ” “အငျးပါခငျလေးရာ၊အိမျသာသှားမလား” “အငျးကိုကို” ခငျလေးကိုအိမျသာဖကျချေါပွီးသှားခိုငျးလိုကျတယျ။ခငျလေးလဲစောကျဖုတျနှငျ့ဖငျကိုရဆေေးပွီးသနျ့ရှငျးရေးလုပျကာထှကျခဲ့တယျ။ အဝတျအစားတှပွေနျဝတျပွီးကြျောကြျောထှနျးသူငယျခငျြးကိုဖုနျးဆကျတော့သူငယျခငျြးက ဆိုငျမှာဝငျပေးပါဆိုလို့သော့ဝငျပေးပွီးခငျလေးကိုလိုကျပို့လိုကျတယျ။ ခငျလေးတို့ဘဝရှဆေ့ကျလြောကျဖို့ရာအဆငျပွနေပွေီ။ခငျလေးမိဘကိုသှားပွောတဲ့မမကွီးက ခငျလေးကိုတငျတောငျးဖို့ရာလယျဧကသုံးဆယျ၊ထှနျစကျနှဈစီး၊ခငျလေးအတှကျရှတေဆငျစာအပွငျသိနျးတဈရာလကျဖှဲ့ဖို့ပွောကွားတော့ခငျလေးမိဘကခကျြခငျြးသဘောတူလိုကျပွီးရကျကောငျးရှေးခဲ့တယျ။ခငျလေးနှငျ့ကြျောကြျောထှနျးမှာအရမျးဝမျးသာပွီးမင်ျဂလာဆောငျရနျအတှကျကွိုတငျပွငျဆငျရတော့တယျ။ မင်ျဂလာဖိတျစာတှရေိုကျပွီး၊ဝငှေတော့မှ မငျးမငျး ဒေါသထှကျတော့တယျ။ “တောကျ ကှာ ငါဒီလောကျပွောထားရကျနဲ့” ကြျောကြျောထှနျးအပျေါမှာလညျးဒေါသထှကျသလို ခငျလေးအပျေါလညျးနာကညျြးမိတယျ။
ခငျလေးရှိရာမွို့ပျေါသှားတော့ ခငျလေးခှငျ့ယူပွီးမွို့ပွနျသှားတယျ။ဓလထေုံ့းစံအရခငျလေးအိမျမှာမင်ျဂလာဆောငျပွီး သတို့သားကရှာကနသေတို့သမီးအိမျကိုသှားရောကျရမှာဖွဈတဲ့အတှကျခငျလေးကကွိုပွီး ခှငျ့ယူသှားခဲ့တာ။ခငျလေးကိုဖုနျးဆကျတော့လညျးခငျလေးကမကိုငျတော့ပါ။မင်ျဂလာရကျနီးလကြေျောကြျောထှနျးတို့အိမျကလူစညျလေ မငျးမငျးစိတျထဲမခံခြိမခံသာဖွဈလနှေငျ့မို့ မငျးမငျးကနှဈယောကျလုံးအရှကျရစဖေို့ကွံစညျလိုကျတော့တယျ။ မင်ျဂလာအခါပေးအသံခြဲ့စကျတှကေားပျေါတငျပွီးခငျလေးတို့မွို့ဘကျကို ကားတှတေသီတသနျးကွီးထှကျတော့မှ မငျးမငျးပွုံးလိုကျကာ “သောကျရှကျမရှိတဲ့ကောငျနှငျ့ငှမေကျတဲ့မိနျးမ နငျတို့သောကျရှကျကှဲပွီ”ဆိုပွီး Fbပျေါမှာခငျလေးနှငျ့မငျးမငျးလိုးခဲ့ကွတဲ့မူဗီဖိုငျကိုတငျလိုကျတယျ။
မင်ျဂလာပှဲကရှာရဲ့မကျြနှာဖုံးဆိုတော့လူစညျတယျ။Fbပျေါမှာ ပုံတငျရနျအတှကျဓာတျပုံတှရေိုကျကွlive လှငျ့ကွရငျးနှငျး မငျးမငျးရဲ့ Postနှငျ့မူဗီကတကျလာတယျ။တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျပွောရငျးကကြျောကြျောထှနျးအမကွီးသိသှားတဲ့အခါ “မောငျလေး ကြျောကြျော” “ဗြာ မမ ဘယျလိုလုပျမလဲမောငျလေး” “ကနြျော ဘာပွောရမလဲမမရယျ” “မောငျလေး မမကသိပွီးသားပါ၊ဒါပမေယျ့ သိသာသိစေ လူမမွငျစနှေငျ့တဲ့၊အခုတော့မမ လေ မောငျလေးနှငျ့ခငျလေးကိုသဘောမတူ တော့ဘူး” “ဟုတျကဲ့မမ ကနြျောသိပါတယျ။ကနြျောတို့ရဲ့ဂုဏျသိက်ခာအရ၊ခငျလေးကိုကနြျောခဈြပမေယျ့စှနျ့လှတျလိုကျမယျမမ” “အငျးဟုတျပွီ၊ဒီတော့မောငျလေးပွနျတော့ ကနျြတာမမစီစဉျလိုကျပါ့မယျ” “ဟုတျကဲ့မမ” “အားလုံးပွနျလှညျ့တော့” “ဟုတျကဲ့” အားလုံးကစိတျမကောငျးသလို မငျးမငျးအပျေါလညျးဒေါသထှကျကွတယျ။
ခငျလေးကိုလဲ မုနျးကွတယျ။ကြျောကြျောထှနျးကိုအားပေးရငျးရှာကိုပွနျလှညျ့ကာသှားကွတယျ။ကြျောကြျောထှနျးအမက ခငျလေးဆီဖုနျးဆကျလိုကျတယျ “ဟလို ” “ဟုတျကဲ့မမ ခငျလေးပါ” “ခငျလေး မမပွောမယျ၊ခငျလေးခဏနားထောငျ” “ဟုတျကဲ့မမ” “အခုမင်ျဂလာပှဲပကျြပွီခငျလေး” “ရှငျ! မမ၊ဘာ ဘာ ဖွဈလို့လဲမမ” “ခငျလေး မငျးမငျးက ခငျလေးနှငျ့ဖွဈခဲ့တာတှကေိုအငျတာနကျပျေါတငျလိုကျပွီခငျလေး၊မမက သိပမေယျ့မောငျလေးကိုစိတျခမျြးသာစခေငျြလို့မသိခငျြယောငျဆောငျပွီးခငျလေးနှငျ့လကျထပျပေးခငျြခဲ့တာ၊အခုလိုတနိုငျငံလုံးသိပွီးတော့ ကိုယျ့မောငျလေးနှားကခြံနရေမယျ့အဖွဈကိုမမမခံနိုငျဘူး၊ဒီတော့ခငျလေးမမကိုနားလညျပေးပါ၊ခငျလေးနှငျ့မမတို့ရစေကျကဟီလောကျပဲပါတယျ မှတျလိုကျတော့” “ခငျလေးသဘောပေါကျလိုကျပွီ အစစအရာရာကိုသတိမထားပဲကာမအလိုလိုကျကာ မငျးမငျးကိုခှငျ့ပွုခဲ့လို့ ခငျလေးဘဝအမညျးစကျတှနှေငျ့မိဘတှလေညျးသူမြားတံတှေးခှကျပကျလကျမြောရတော့မယျ။ခငျလေးအရမျးရှကျတယျ။မင်ျဂလာဝတျစုံပျေါခငျလေးမကျြရညျစကျတှတေစကျစကျကလြာတယျ။ခငျလေးဆုံးဖွတျခကျြတဈခုခလြိုကျတယျ။အဲဒါကတော့လူ့လောကကိုစှနျ့လှတျဖို့ပါပဲ …………ပြီးပါပြီ။
ခင်ခင်လေးတစ်ယောက်သူနာပြုသင်တန်း ဆင်းပြီးတောရွာလေးတစ်ရွာမှတာဝန်ကျတယ်။ အသက်ကငယ်ငယ်ရုပ်ရည်လေးကရှိတော့အဖြူနှင့်အနီလေးတွဲဝတ်ထားရင်ကျက်သရေရှိလုံးဝန်းပြီးတောင့်တင်းတဲ့တင်သားလေးက အိချောပိုထက်သာတယ်။အွန်း တင်ပဲရှိတယ် ထင်လားရင်လဲရှိတယ်။မြန်မာဝတ်စုံလေးနှင့်ဆိုမြင်သူတိုင်းချစ်ကြတယ်။ဒါပေမယ့်ခင်ခင်လေးမှာရာ်းစားသနာမရှိခဲ့ဘူး။ကြိုက်တဲ့သူတွေရှိပေမယ့်လည်းခင်ခင်လေးစိတ်မဝင်စားရဲဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ခင်လေးမိဘကဆင်းရဲတယ်။ မိဘကပညာသင်ပေးနေတဲ့အရွယ်မှာ ရည်းစားသနာများထားခဲ့ရင်မိဘကပြောဆိုပြီးပညာဆက်သင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်လို့ပဲ။ “ကဲညီမ ညီမလေးကိုဒီရွာကလူတွေနှင့်မိတ်ဆက်ပေးမယ်” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဆရာ” “ဒီနေ့ ခင်များတို့ရွာကိုအသစ်ရောက်လာတဲ့ သားဖွားဆရာမလေးပါ၊သူ့နာမည်ကခင်ခင်လေးတဲ့၊ဝန်ထမ်းအသစ်တွေချပေးတဲ့အတွက် အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိရင်ဒီရွာကရပ်မိရပ်ဖတွေကကူညီစောင့်ရှောက်ပေးစေချင်တယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး၊ကျနော်တို့စောင့်ရှောက်ပေးပါမယ်။
အခုတော့ဆေးပေးခန်းကဆောက်နေဆဲကာလဆိုတော့ကာဆရာမလေးကို ကျနော်တို့ရွာကသင့်တော်တဲ့အိမ်တစ်အိမ်မှာနေရာမှာစီစဉ်ပေးပါ့မယ်” “ဒီကိစ္စက ဥက္ကဌကြီးတို့ကိုအားကိုးရမှာပဲ” “ရပါတယ်ဆရာကြီး၊ကျနော်တို့ရွာရဲ့ကျန်းမာရေးနိမ့်ကျတဲ့အခြေအနေတွေတိုးတက်လာပေါင်ကျေးရွာဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်းချပေးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးတို့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်” “ကဲဒီလိုဆိုကျနော်ဥက္ကဌကြီးတို့နဲ့ကျနော့်ဝန်ထမ်းကိုစိတ်ချထားခဲ့ပါမယ်” မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးပြန်သွားပြီးနောက်မှာတော့ “ဆရာမလေး ဘာမှအားမငယ်နဲ့” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “ဆရာမလေးကို ဒေါ်ထားတို့အိမ်မှာနေရာချပေးပါ့မယ်။ဒေါ်ထားတို့အိမ်ကကျယ်လဲကျယ်တယ်ရေတွင်းနှင့်လည်းနီးတယ်။” “ဟုတ်ကဲ့ဦးသင့်တော်အောင်စီစဉ်ပေးပါ” “ဒေါ်ထားရေ ကျနော်ခင်များကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပြီ” “အမလေးကိုရင်ရယ် ကျမကဒီလိုသမီးချောချောလေးအိမ်လာနေတာကိုပဲအရမ်းဝမ်းသာလှပါပြီ” “လာသမီးလေး အဒေါ်တို့အိမ်ကိုလာလိုက်ခဲ့” “မင်းမင်းအောင်ရေနင် ငါ့သမီးလေးအထုတ်တွေသယ်ခဲ့တော့” ခင်ခင်လေး ကကိုကိုမင်းမင်းအောင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။
တောသားဆိုပေမယ့်အသားကမမဲဘူး ရုပ်ရည်ခပ်သန့်သန့်လေးနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့သူမျိုး၊လို့တွေးနေတုန်း “သမီးလေး လိုအပ်တာရှိရင်မင်းမင်းကိုခိုင်း အဲဒါ အဒေါ့်တူပဲ” “ဟုတ်ကဲ့အဒေါ်” ရွာစပ်လေးမှာ ဒေါ်ထားရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့တယ် အိမ်ခြံဝင်းမှာရေတွင်းလေးနှင့်အိမ်ရှေ့မှာလမ်းဘေးမှာလယ်ကွင်းတွေသန့်ရှင်းတဲ့လေကိုရူလို့ရတာပဲဆိုပြီခင်ခင်လေးသဘောကျသွားတယ် “လာသမီးလေးသမီးလေးနေမယ့်အခန်းပြမယ်” “ဟုတ်ကဲ့အဒေါ်” “မင်းမင်းရေ သမီးလေးနေမယ့်အခန်းရှင်းပေးစမ်းပါအုံးကွယ်” “ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေး” မင်းမင်းတစ်ယောက်ဖင်ပေါ့စွာအခန်းကိုရှင်းလင်းပေးလိုက်တယ်။အဒေါ့်အိမ်နှင့်မင်းမင်းတို့အိမ်ကခြံဝင်းတဝင်းထဲ။
ဆရာမလေးကလဲ အရမ်းလှတော့မင်းမင်းရင်ခုန်နေပြီ။ “ဆရာမလေးရေ ပြီးပြီဗျ” “အာ ကိုမင်းမင်းကလည်းဆရာမလို့မခေါ်ပါနှင့်ရှင် ခင်လေးလို့ပဲခေါ်ပါ” “ဟုတ်ကဲ့ခင်လေး” ခင်လေး အခန်းကိုနေရာလေးချလိုက်တယ်။ အခန်းနောက်ဘက်မှာပြူတင်းပေါက်ကလေးနှင့်မို့အလင်းရောင်လေးရတယ်။ပါလာတဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းကိုနေရာလေးချ၊အိပ်ရာလေးခင်းပြီးလှဲချလိုက်ပြီးနားလိုက်တော့အိပ်ပျော်သွားတော့တယ် “ခင်လေး ခင်လေး” “ဟင် ” “အိပ်ပျော်နေတာလား” “ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းမင်း” “ခင်လေးရေချိုးဖို့ကျနော်ရေဖြည့်ထားတယ်” “အားနာစရာကိုမင်းရယ်” “အားမနာနှင့်ဗျ၊ရေတွင်းနားမှာရေအိုးရှိတယ် အဲဒီမှာချိုးရမယ်” ခင်လေးရေတွင်းနားလှမ်းကြည့်တော့ခြောက်လုံးဝင်စဥ့်အိုးလေးနှင့်သစ်သားပြားကြီးတပြားခင်းထားတဲ့နေရာလေး၊ဟင်းလင်းပြင်ကြီးမှာ ခင်လေးရှက်သွားတယ်။
အဆောင်မှာနေတုန်းကရေချိုးရင်တကိုယ်လုံးချွတ်ပြီးရေချိုးခဲ့တာ အခုတော့ဟင်းလင်းပြင်ကြီး “အင်းလေ သူဓလေ့နှင့်သူပဲလေ” “ခင်လေး ရေချိုးရတာအဆင်မပြေလို့လား” “ဟုတ်တယ်ကိုမင်းမင်း” “အင်းလေ ခင်လေးကအပျိုလေးဆိုတော့ရှက်နေမှာပဲ” :”အဲဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုမင်းမင်း၊ချိုးနေကြနေရာမဟုတ်လို့ပါ၊ကျမတို့အနေနှင့်ရှက်တာတွေကိုခွာချပြီးအလုပ်လုပ်ရတာမလား” “အင်းဟုတ်တယ်ဗျ။မမြင်ဝံ့ဆေးဆရာတဲ့၊ ခင်လေးတို့အနေနှင့်ကကျတော်တို့မမြင်ဖူးတဲ့အရာတွေလည်းမြင်ဖူးနေမှာပဲ” “အင်းအဲတာလည်းဟုတ်တယ်၊သိတဲ့အတိုင်းလေ၊ခင်လေးကသားဖွားဆရာမဆိုတော့လည်းမမြင်ဝံ့တာမရှိဘူးပေါ့” “ဟုတ်ပါပြီ။သူများဟာတွေမြင်ဖူးပြီးကိုယ့်အလှည့်ကျရင်ကြောက်မနေနှင့်တော့” “ဟော့တော် ကိုမင်းမင်း” “ဟားးစတာပါဗျာ။ကျနော်ရှောင်ပေးပါ့မယ်”မင်းမင်းနှင့်တွေ့ပြီးခင်လေးပျော်လာတယ်။ရွာမှာတာဝန်ကျရင်ပျင်းနေမှာလို့ထင်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့မပျင်းရတော့ဘူးလေ ခင်လေးရေချိုးပြီးရင်ဘတ်ပေါ်သဘက်လွမ်း ပြီးအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့တယ်။
အခန်းထဲဝင်ပြီးသနပ်ခါးရေကြဲလေးလိမ်းကာအဝတ်လဲပြီးထွက်ခဲ့တယ်။ “သမီးရေ စားလို့ရပြီကွဲ့” “ဟုတ်ကဲ့အဒေါ်” “မင်းမင်းနင်လဲတစ်ခါတည်းစားလိုက်လေ” “ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေး” မင်းမင်း၊နှင့်ဒေါ်လေးတို့စားဝိုင်းကိုခင်လေးဝင်စားလိုက်တယ်။ “စားကောင်းရဲ့လား သမီး” “ကောင်းတယ် အဒေါ်” “ထမင်းစားပြီးတော့လာသမီးလက်ဖက်လေးစားပြီးစကားလေးပြောကြတာပေါ့ကွယ်” “ဟုတ်ကဲ့အဒေါ်” “ရေနွေးကြမ်းဝိုင်းလေးမှာ ခင်လေးတို့စကားပြောနေကြတယ်။ရှစ်နာရီခွဲအချိန်ရောက်တော့ “သမီးလေးစကားပြောချင်သေးရင်ပြော၊အဒေါ်တော့အိပ်ချင်ပြီ” တောဓလေ့ကလူတွေအစောကြီးအိပ်အစောကြီးထရတော့ဒေါ်ထားအိပ်ရာဝင်သွားပြီ။ “ခင်လေးအိပ်ရင်အိပ်တော့လေ” “နေ့လည်ကအိပ်ထားတော့ခင်လေးမအိပ်ချင်သေးပါဘူး” “အင်း ကိုမင်းလဲမအိပ်ချင်သေးပါဘူး၊ခင်လေးမအိပ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်ဆက်စကားပြောကြမယ်” “ဟုတ်ကဲ့ ကိုမင်း” သင်တန်းတုန်းကအတွေ့အကြုံတွေကို ဟာသပြောဖြစ်ကြတယ်၊ဒီလိုနဲ့စကားပြောရင်းရင်နီးသထက်ရင်းနီးလာကြတယ်။
တဖြေးဖြေးနှင့်ခလေးမွေးတာကိုပြောပြဖြစ်လာတဲ့အဆင့်ရောက်ခဲ့တယ်။ညနက်လာတော့ “အင်း ခင်လေးနှင့်စကားသာပြောနေရရင်တညလုံးပြောဖြစ်မယ်” “ဟော့တော့ ကိုမင်းအိပ်ရေးပျက်မယ်လေ” “ကျနော်ကရပါတယ်ဗျ၊ခင်လေးအတွက်ပဲ စိတ်ပူတာ” “ရှင်ဘာဖြစ်လို့ ကိုမင်း” “ဒီလိုဗျာ မီးထွန်းပြီးစကားပြောနေရင်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကခင်လေးအပေါ်တမျိုးမြင်မှာစိုးလို့ပါ” “ဘယ်လိုမြင်ကြမှာလဲကိုမင်း” “အခုမှရောက်လာတဲ့ဆရာမလေးကို မင်းမင်းတို့ကချိုင်နေပြီလို့လေ” “ခစ် ခစ် ခစ်” “တကယ်ပါကျနော်တို့တောရွာတွေကအမြင် မကျယ်သေးတော့ပြောကြသေးတယ်လေ” “အင်းဒါနှင့် ရွာတွေမှာသမီးရည်းစားတွေကျစကားဘယ်လိုပြောကြလဲ” “ညဘက်ပြောချင်ရင်အချိန်းအဆက်လုပ်ရတာပေါ့” “ဘယ်သွားပြောကြလဲ” “အဝေးကြီးမသွားဘူးလေ၊အဆင်ပြေရင်အိမ်နီးအနားမှာပဲပြောကြတာ”
“အင်း” “အဲဒါထက်အဆင်ပြေရင်ကောင်မလေးဆီမှာပဲပြောဖြစ်တာပေါ့” “ခစ် ခစ် အခန်းထဲခေါ်ပြောတာလား” “အင်းကျနော်တို့လဲကင်းစောင့်လုပ်ဖူးတယ်” “ဟော့တော် ကိုမင်းမင်း” “မနက်ဖြန်ဘာလုပ်စရာရှိလဲခင်လေး” “အင်း မနက်ဖြန် ရွာနီးစပ်ကရွာတွေကိုသွားချင်တရ်။ သူတို့တွေသိအောင်လည်းပြောပြချင်တယ်” “ကျနော်လိုက်ပို့ပေးမယ်” “ကျေးဇူးပါကိုမင်းမင်း” “ဟင်းးဟင်း အခုတော့မသွားဖူးသေးဘဲနှင့်ကျေးဇူးတင်နေတာသွားကြည့်မှကျနော့်ကိုအပြစ်မပြောနဲ့” “ဟင်ဘာလို့ကိုမင်းမင်း” “ကျနော်တို့ရွာတွေကိုသွားရင်လှည်းလမ်းကြောင်းကနေဆိုင်ကယ်မောင်းရတာလေ။
အရမ်းလမ်းဆိုးတယ်” “အယ် တကယ်လား” “မနက်ဖြန်ကျရင်သိရပြီပေါ့” “ဟုတ်ကိုမင်းမင်း၊စကားပြောကောင်းနေတာ ညတော်တော်နက်ပြီ၊ကိုမင်းမင်းလဲအိပ်တော့” “ခင်လေးရောအိပ်တော့မလား” “အင်းအိပ်မယ်လေ မနက်ကျရင်စောစောသွားလို့ရအောင်” “ဟုတ်ပါပြီဗျာ” ခင်လေးစောစောအိပ်လိုက်တယ်။ကိုမင်းမင်းရှိလို့ရွာနီးစပ်တွေကိုသွားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတွေးကာမင်းမင်းကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်။်မနက်အိပ်ရာကနိုးလာတော့ “သမီးလေး နိုးလာပြီလား” “ဟုတ်ကဲ့အဒေါ်” “ဒီမှာကောက်ညင်းပေါင်းရှိတယ်။ရေနွေးလဲရှိတယ်၊ကော်ဖီသောက်ချင်ရင် ကော်ဖီမစ်ရှိတယ်။မင်းမင်းလာပို့သွားတာ” “ဟုတ်ကဲ့အဒေါ်” ခင်လေးမျက်နှာသစ် ပြီးကောက်ညင်းပေါင်းနှင့်ကော်ဖီသောက်လိုက်တယ်။ပြီးမှသနပ်ခါးလိမ်းကာ အဝတ်အစားလဲပြီးအိမ်ရှေ့ကစောင့်တယ်။မင်းမင်းကဆိုင်ကယ်နှင့်ရောက်လာပြီး “ခင်လေးသွားလို့ရပြီလား” “ရပြီလေကိုမင်း” “ဟေ့ မင်းမင်းဖြေးဖြေးမောင်းအုံး” “ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေး” “လာခင်လေးသွားကြရအောင်” ခင်လေးကိုယ်မင်းဆိုင်ကယ်နောက်ကထိုင်လိုက်တယ်။
ရွာပြင်ရောက်လာတော့ “ခင်လေးပြုတ်ကြမယ်နှော်” “ဟုတ်ကိုမင်း” “အားမနာနဲ့ကျနော့်ခါးဖက်ထား” “အမယ် ကိုမင်းနှော်” “တကယ်ပြောတာလမ်းကြမ်းတယ်” ခင်လေးမဝံ့မရဲဖြစ်ကာကိုမင်းခါးကိုဖက်လိုက်တယ်။လမ်းကလည်းအရမ်းဆိုးတော့ကိုမင်းခါးကိုတင်းတင်းလေးဖက်လိုက်တော့နို့တွေကကိုမင်းကျောကိုထိကပ်နေတယ်။အခုလိုမျိုး ဆိုင်ကယ်စီးရတော့ခင်လေးစိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ရင်လဲခုန်တယ်။မင်းမင်းမှာမိမိကျောကိုခင်လေးရင်ဘတ်နှင့်ကပ်ပြီးဖက်ထားတော့စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်လာကာလီးကတောင်လာတယ်။သာရာတဲ့အထိအတွေ့ကဖြစ်လာတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းခင်းလေးကိုလိုးရရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲလို့တွေးနေပြီး လိုးလို့ရအောင်ငြံစည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ “ရရဲ့လား ခင်လေး” “အင်း ရတယ် ကိုမင်း” မေးသူနှင့်ဖြေသူအသံတွေကမူမမှန်တော့ပေ။နှစ်ယောက်သားစိတ်တွေဂယောက်ကယက်နှင့်ဖြစ်နေပြီ။နှစ်ဦးသားလည်းရိပ်မိနေတယ်။
ရွာငါးရွာကိုသွားပြီးနောက် ခင်လေးတို့ပြန်လာကြတယ်။ “ခင်လေး အဆင်ပြေရဲ့လား” “အင်းလူလဲညောင်းကိုက်နေပြီ’ “ခင်လေးတော့မသိဘူး၊ကျနော်တောင်ဖင်ကျိမ်းနေပြီ” “ခစ် ခစ် ခစ်၊ကိုမင်းကလဲ” “ခင်လေးကရော အတူတူပဲလေ” “ဟားးးးဟားးးး” ညနေအိမ်ရောက်တော့ “ကဲခင်လေးရေနားလိုက်အုံး၊ကျနော်ညနေ မှပြန်လာတော့မယ်” “ဟုတ်ကိုမင်း” ခင်လေးလဲ ပင်ပန်းတာမို့နားရင်းအိပ်လိုက်တယ်။ညနေစောင်းမှနိုးကာရေချိုးလိုက်တယ်။လန်းဆန်းသွားသလိုခံစားရပေမယ့်တကိုယ်လုံးကိုင်ရိုက်ထားသလိုနာကျင်နေတယ်။ “သမီးရေ အဒေါ်မှာကိစ္စပေါ်လာလို့ဟိုဘက်ရွာသွားရမယ်၊မင်းမင်းကို ခေါ်သွားလိုက်ဦးမယ်” “ဟုတ်ကဲ့အဒေါ်” “တကယ်လို့ အရေးကြီးကိစ္စကြောင့်ပြန်မလာနိုင်ရင် မင်းမင်းအမေခေါ်အိပ်လိုက်နှော်” “ရပါတယ်အဒေါ်” “အေးကွယ်မသွားမဖြစ်လို့သာသွားရမှာသမီးလေးကိုအားနာလိုက်တာ” “သွားပါအဒေါ်ရယ် ဘာမှနောက်ဆံတင်းမနေနှင့်” ”အေးကွယ်”်ကိုမင်းမင်းနှင့်အဒေါ်ဆိုင်ကယ်စီးပြီးထွက်သွားတယ်။
ခင်လေးလဲထမင်းခူးခပ်စားလိုက်ပြီး ညခုနှစ်နာရီလောက်ကြာတော့မင်းမင်းရောက်လာတယ်” “ခင်လေးထမင်းစားပြီးပြီလား” “ဟုတ်ကိုမင်း” “နေရတာအဆင်ပြေရဲ့လား” “နာနေတာပေါ့၊ကျောတွေခါးတွေလဲအောင့်နေတာပဲ” “အင်းလေ စီးနေမကျတော့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာ” “အင်းပေါ့ ကိုမင်းကမဖြစ်ဘူးလား “မဖြစ်ပါဘူး” “အင်း အဒေါ်ရှိရင် အဒေါ်ကိုခနနှိပ်ခိုင်းရင်ရမှာ” “အာ ကိုမင်းကလည်းလူကြီးကိုအားနာစရာ” “ကျနော့်အဒေါ်က သဘောကောင်းပါတယ်” “ဒါပေမယ့်” “ဟင်းးးကျနော့်အစားနှိပ်ပေးတယ်လို့သဘောထားခိုင်းလိုက်မယ်” “အမ် ဘယ်လိုဘယ်လို” “ဒီလိုခင်လေး ခါတိုင်းအဒေါ်နေမကောင်းရင်ကျနော်နှိပ်ပေးနေကြလေ” “အခုခင်လေးနေလို့မကောင်းတော့ကျနော့်အတွက်အစားထိုးပေးနှိပ်ခိုင်းပေးတာပြောတာပါ” “ခစ် ခစ်ရပါတယ်ကိုမင်းရယ်” အဒေါ်မရှိတော့စကားပြောရတာပိုလွတ်လပ်တယ်။
ပြောရင်းနှင့် ဆက်ကိစ္စနည်းနည်းပါတယ်။ဒီတော့စိတ်ထဲတမျိုးလေးဖြစ်ပြီးအရသာရှိတယ်။မင်းမင်းသွေးတိုးစမ်းပြီးရသလောက် ထည့်ပြောတယ်။သားဖွားဆရာမလေးဆိုတော့ဒီကိစ္စကပြောပလောက်အောင်မထူးခြားဘူးလေ။ဒါပေမယ့်နှစ်ယောက်တည်းပြောရတော့ခင်လေးစိတ်တွေလည်းတမျိုးဖြစ်နေပြီ။ စကားပြောရင်းစိတ်ပါလာတယ်။ပြောရင်းညနက်လာပြီ။ “ခင်လေး တစ်ယောက်တည်းအိပ်ရဲလား” “နည်းနည်းတော့ကြောက်တာပေါ့” “အကိုလာအိပ်ပေးရမလား” “အာ ကိုမင်းကလည်း” “ဒီလိုလုပ်ပါလား ၊ကျနော်တံခါးပိတ်လိုက်မယ်။ညဘက်ကြီးဆရာမလေးတစ်ယောက်တည်းကျနော်ရှိနေတာလူမြင်ရင်မကောင်းဘူး” “အင်းဟုတ်တယ်ကိုမင်း” “မင်းမင်းတံခါးထပိတ်လိုက်တယ်” ဖယောင်းတိုင်မှိန်ပြပြအောက်မှာနှစ်ယောက်သားရင်တွေခုန်နေပြီ။
ခင်လေးပြောရင်းကျောကအောင့်လာလို့တချက်ဆန့်လိုက်တယ်။ “ကျောတွေအောင့်နေတာလားခင်လေး” “အင်းတကိုယ်လုံးအောင့်နေတာ” “ကျနော်နှိပ်ပေးမယ်” “ဟင့်ရတယ်မနှိပ်နဲ့ကိုမင်း၊ဆေးသောက်ထားတယ်” “အားနာစရာမလိုဘူး” “ခနလေးနှိပ်ရမှာ” မင်းမင်းမရမကပြောလိုက်ပြီးခင်လေးအနားကပ်လိုက်တယ်။ခင်လေးမှာလည်းနှိပ်လိုက်ရင်သက်သာသွားမယ်အထင်နှင့်မို့ “အင်းကိုမင်း” “ခင်လေးမှောက်အိပ်လိုက်” “အင်း” “ခနလေးစောင်လေးနှင့်ခေါင်းအုံးလေးယူလိုက်မယ်” ကိုမင်းအဒေါ့်အခန်းထဲကခေါင်းအုံးနှင့်စောင်ယူကာကြမ်းပေါ်စောင်ခင်းပြီး “ရပြီခင်လေးမှောက်အိပ်လိုက်” ခင်လေးခေါင်းအုံးပေါ်မှောက်ချလိုက်တယ်။မင်းမင်းလည်းဒီအခြေအနေဆိုရင်မဆိုးဘူးဆိုပြီးခင်လေးအနားကပ်ပြီးဒူးထောက်ကာကျောပြင်ကိုစမ်းပြီးလက်မနှင့်ခါးကြောကိုဖြေးဖြေးချင်းနှိပ်လိုက်တယ်။အထိအတွေ့ကအိစက်ညက်ညောလွန်းလို့လီးကဆတ်ကနဲတောင်လာပြီ။ လက်မနှင့်ခါးကြောလေးကိုခွညှပ်ကာဖြေးဖြေးချင်းအပေါ်အောက်ဆွဲပေးလိုက်တယ်။
”အာ့ အင်းးးအင်းးး” “နာလို့လားခင်လေး နည်းနည်းလေးကိုမင်း” “အင်းကျနော့်မှာဆေးရှိတယ်” “အပူဆိုရင် မခံနိုင်ဘူးကိုမင်း” “အအေးဆေးရှိတယ် ခင်လေး” “အင်းကိုမင်း” ကိုမင်းဆေးဘူးကိုလှမ်းယူပြီညှစ်ထုတ်ကာ ခင်လေးအင်္ကျီ ကိုမပြီးကျောပြင်ကိုပွတ်လိုက်တယ်။ပြီးမှတဖြေးဖြေးလက်မလေးနှင့်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီး “ခင်လေးရတယ်မလား” “အင်း” ကိုမင်းလုံချည်ကိုဖြေလျော့ပြီးတင်သားနားအထိဆေးလိမ်းကာပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ခင်လေးစိတ်တွေဝေခွဲမရဘူး၊တဖြေးဖြေးနယ်ကျွံလာတဲ့ ကိုမင်းလက်တွေက ခင်လေးလုံးချည်ကိုဖြေချနေပြီ။အိမ်နေရင်းအတွင်းခံကမဝတ်ထားတော့ရင်ထဲတမျိုးဖြစ်လာကာတင်သားနှစ်ဘက်အားတင်းပြီးညစ်ထားလိုက်တယ်။ ကိုမင်းလည်း တင်သားတွေကိုမထိတထိလုပ်ပြီးခင်လေးစိတ်ပါအောင်ဆွလာတယ်။
တင်သားနှစ်ဘက်ကိုပါလက်နှင့်ဖိနှိပ်ပေးပြီးဘေးနှစ်ဖက်ဆွဲချတယ်။အမှန်ကဖင်ကြားအထိမြင်ရအောင်လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ခင်လေးမှာရှေ့တိုးရကောင်းမလားနောက်ဆုတ်ရကောင်းမလားတွေးနေတုန်းမှာပင်ကိုမင်းကခင်လေးအပေါ်ကခွပြီးထိုင်လိုက်တယ်။ “အာ ကိုမင်းအဲလိုမလုပ်နဲ့လေ” “မဟုတ်ဘူးခင်လေးအကြောကိုအားညီအောင်နှိပ်ချင်လို့ပါ” “အင်းပါ” ကိုမင်းတဖြေးဖြေးနှင့်တဆင့်တက်ကာကျော်အေပ်ါဆေးလိမ်းရန်အတွက်ဘရာကိုအပေါ်တွန်းတင်လိုက်တယ်။ပြီးမှကျောတပြင်လုံးဆေးလိမ်းပြီးသက်ညှာစွာနှိပ်ပေးတယ်။
ဒါပေမယ့်အပေါ်တွန်းတင်တဲ့ဘရာကအောက်ကိုပြန်ကျလာတယ်။ကိုမင်းကဘရာဂျိတ်ကိုဖြုတ်လ်ုက်တယ်။ “အာ ကိုမင်း” တဖြေးဖြေးကိုမင်းကအပေါ်ထိရောက်လာသလိုခင်လေးဖင်ကြားကိုမင်းလီးကထောက်လာတယ်။ “လီးကြီးကခင်လေးဖင်ကိုထောက်နေတာ ခင်လေးသိပေမယ့်မပြောရဲဘူး” ခင်လေးစိတ်တွေထလာပြီးပိပိကအရည်စိုလာပြီလေ။ “ရပြီကိုမင်း” “အင်းအပေါ်ကတော့ရပြီ ပေါင်တွေနာနေမှာပဲလေ” “ရပါပြီ ကိုမင်းကလည်း” ထိုစဉ်မှာပင်ဖယောင်းတိုင်မီးလေးငြိမ်းသွားရတယ်။ “ဟော့တော့မီးငြိမ်းသွားပြီ” “အင်း ခင်လေး ကိုမင်းဒီမှာပဲအိပ်တော့မယ်” “ကိုမင်းကလည်းမဖြစ်ပါဘူးဆို” “ဘာဖြစ်လို့လဲ” “အင်းပြောတတ်ဘူး” “အင်းလေ မပြောနဲ့တော့ခင်လေး” ကိုမင်းခင်လေးကိုဖက်လိုက်ပြီး နမ်းလိုက်ကာ “ကျနော်အရမ်းချစ်နေပြီခင်လေး” “အို..ကိုမင်းနှော်” ခင်လေးလဲစိတ်တွေဂယောင်ချောက်ခြားသွားပြီး ကိုမင်းကိုပြန်ဖက်ထားလိုက်တယ်။
အထိအတွေ့မှာခင်လေးတစ်ယောက် ဆင်ခြင်တုံတရားတွေပျောက်ခဲ့ပြီးခင်လေးလည်းတဏှာရေစီးနောက်လိုက်မိခဲ့ပြီလေ။ကိုမင်းမှာခင်လေးကိုဖက်ရင်းတင်သားတွေကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ခင်လေးနို့ရှိရာကိုအောက်သို့လျှောချပြီးခင်လေးနို့ကိုဖြေးညှင်းစွာစို့လိုက်တယ်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့ အင်းဟင်းးးဟင်းးးး” တကိုယ်လုံးကြက်သီးနွေးတွေတဖျန်းဖျန်းထပြီးခင်လေးအရမ်းကိုစိတ်တွေထလာတယ်။ နို့စို့ရင်းတင်ပါးကြားလက်သွင်းပြီးအဖုတ်ထဲကိုလက်နှင့်နှိုက်ရာလက်ထဲမှာစောက်ရည်အချို့ကပ်ပါလာခဲ့တယ်။ “ခင်လေးစိတ်တွေထန်စပြုနေပြီမှန်း ကိုမင်း တွေးမိပြီးခင်လေးနို့ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ဖီးလ်တက်အောင်စို့လိုက်ပြီး ခင်လေးကိုပက်လက်လှန်ကာအပေါ်ကနေလိုက်တယ်။ပြီးမှနို့မှတဆင့်အောက်သို့ဆင်းကာစောက်ဖုတ်နေရာလေးကို လျှာအပြားလိုက်နမ်းလိုက်တယ် “ရွတ်..ပလပ်” “အာ့ အိုးးးအင်းးးဟင်းးးးး” တကိုယ်လုံးတုန်တက်သွားကာအဖုတ်ထဲကအရည်တွေစိမ့်ဆင်းသွားပြီးတခါမှမခံစားဖူးသောအရသာထူးကိုခံစားမိကာခင်လေးမှာ အဖုတ်ထဲလျှာဝင်လာအောင်ပေါင်ကိုကားပြီး မြှောက်ပေးမိပြန်တယ်။
“အင်းဟင်းးဟင်းးးး အားးရှီးးရှီးးး” မင်းမင်းလဲတတ်စွမ်းသမျှကိုခင်လေးတစ်ယောက်ဖီးတက်လာစေဖို့ကြိုးစားပြီးလုပ်ပေးလိုက်ရာ ခင်လေးခမျှာမကြုံဖူးသေးတဲ့ကာမရေစီးမှာမျောပါသွားတော့တယ်။ ခင်လေးတစ်ယောက်စိတ်ပါလာလို့ အော်ညည်းမိသလိုကာမစိတ်ကအထွဋ်အထိပ်ရောက်လို့တကြိမ်ပြီးသွားခဲ့တယ်။ မင်းမင်းလည်းလီးက အရမ်းတောင်နေပြီလီးထိပ်မှာလည်းအရည်ကြည်တွေစိုနေပြီ။လီးကိုတချက်နှစ်ချက်ဂွင်းတိုက်လိုက်ပြီးခင်လေးအဖုတ်ကိုတေ့လိုက်တယ်။ခင်လေးမှာကာမစိတ်တွေဖြစ်ပြီး အလိုးခံချင်နေပြီမို့မတားမြစ်နိုင်ဖြစ်နေပြီ။လီးတေ့ပြီး ဖိချလာတာကြောင့်အဖုတ်ထဲလီးကတင်းကြပ်ပြီး “ဗျစ် ဖြစ် ဗျိ ဗျိ” “အာ့ ကိုမင်း ဖြေးဖြေး” လီးတရစ်ချင်းတိုးဝင်လာတယ်။အဖုတ်ထဲပူကနဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခင်လေးကိုမင်းကိုပြောလိုက်တယ်။ ကိုမင်းလည်းခင်လေးနို့ကိုကုန်းစို့ပြီးခနလေးလီးထည့်ထားရင်းငြိမ်ပေးလိုက်တယ်။
ခင်လေးစောက်ဖုတ်ကညှစ်သလိုခံစားရပြီးခင်လေးလည်းညည်းလာတော့မှထပ်ပြီးသွင်းလိုက်တယ်။ “ဗျစ် ဗျစ် ဘွတ် ဘွတ် ဖွတ်” “အာ့အင်းးဟင်းးးအာ့ရှီးးး” အဖုတ်ယက်ခံရတဲ့ခံစားမွု့မျိုးမဟုတ်ဘဲလီးဝင်လာတဲ့ခံစားချက်ကတမူထူးခြားတယ်။အဖုတ်ထဲဝင်လာတဲ့လီးကအဖုတ်အတွင်းသားတွေကိုပွတ်ဆွဲသွားတော့ခင်လေးမှာအရမ်းကိုကာမစိတ်တက်လာစေပြီးဖီးတက်နေတော့မျက်လုံးမှိတ်ကာနွုတ်ခမ်းကိုက်ပြီး ညည်းတွားမိလိုက်တော့တယ်။ခင်လေးညည်းတွားသံကကိုမင်းကိုတဏှာစိတ်ပိုကြွလာစေပြီးလိုးချက်တွေမြန်လာတယ်။ “ဘွတ် ဖွတ် .ဖန်းးဖန်းးးးဖန်းးး” “အာ့ရှီးးရှီးးးကိုမင်းးအာ့ရှီးးးရှီးး” “ဗျစ် ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းးဖန်းးးးး” ခင်လေးမှာငါးမိနစ်ခန့်သာအလိုးခံရပြီးနောက်ပြီးချင်လာပြန်တယ်။
“ဖွတ် ဘွတ်ဖပ် ဖပ် ဖန်းးးးဖန်းး” “အာ့ရှီးးရှီးးး အားးးး” “ခင်လေးပြီးတော့မလားးး” “အင်းးးကိုမင်းးအာ့ရှီးးးရှီးး” ကိုမင်းလည်းခင်လေးပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အရှိန်နည်းနည်းတင်လိုက်ကာထပ်လိုးလိုက်တယ်။စောက်ဖုတ်ကစေးပိုင်တင်းကြပ်ကာညှစ်ထားမွု့ကြောင့်ကိုမင်းလဲပြီးချင်နေပြီ။တဖတ်တဘွတ်ဘွတ်နှင့်လိုးချက်ပြင်းပြင်းကိုအကြိမ်သုံးရာနီးပါးဆက်လိုးလိုက်ရာ “ဘွတ် ဖွတ်ဖန်းးဖန်းးးးဖန်းး” “အာ့ပြီးပြီ အားးးရှီးးရှီးးး” ကိုမင်းလည်းသုတ်တွေပန်းထွက်ကာပြိုင်တူပြီးသွားရတော့တယ်။မောပန်းသွားတဲ့ကိုမင်း ခင်လေးအနားကပ်အိပ်ကာဖက်ပြီးအနမ်းတွေ ခြွေလိုက်တယ်။ခင်လေးလည်းကိုမင်းကိုဖက်ပြီးအမောဖြေနေရာကနှစ်ယောက်သား အိပ်ပျော်သွားကြပြီးမနက်လေးနာရီလောက်မှခင်လေးနိုးလာခဲ့တယ် “ကိုမင်း” “ဟင်” “ထတော့လေ သွားတော့လူတွေမြင်ကုန်မယ်” “အင်း သွားမယ်ခင်လေး” ကိုမင်းလဲလူးလဲထကာခင်လေးပါးကိုနမ်းပြီး သူ့မိဘအိမ်ဘက်ကိုသွားတော့တယ်။
ခင်လေးလဲညကအဖြစ်အပျက်တွေးကာ တခုခုမှားသလိုခံစားမိလိုက်တယ်။ပြီးမှဖြစ်သွားပြီးပြီဆိုတော့ပြင်မှမရတော့တာဟုတွေးကာ အိပ်ရာကထပြီးအိမ်သာကိုသွားလိုက်ပါသေးတယ်။ရွူးပေါက်ပြီးစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တော့ စောက်ဖုတ်ကိုရေဆေးပြီးဆေးပုံးထဲမှသန္ဓေတားဆေးယူကာသောက်လိုက်ရင်းအိပ်ရာပေါ်ပြန်အိပ်လိုက်တော့တယ်။ နောက်တရက်နေ့လည်ရောက်တော့အဒေါ်ပြန်ရောက်လာတယ်။ခင်လေးလည်းဆေးခန်းရှိရာကိုသွားပြီးလုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်နေလိုက်တယ်။ကိုမင်းလည်းမယောင်မလည်နှင့် ရောက်လာကာ “ခင်လေးအလုပ်တွေများနေလား” “အင်းကိုမင်း” “ကိုမင်းရောအလုပ်မရှိဘူးလား” “အလုပ်က အဝေးကြီးမှာမှမဟုတ်တာ၊အခုကပဲခင်းတွေစိုက်ထားပြီးနားနေတဲ့အချိန်လေ” “ဟုတ်ကိုမင်း” “ခင်လေး ညကျရင် ခင်လေးဆီလာအိပ်မလို့” “မဖြစ်ဘူး ဒေါ်လေးရှိတယ်” “ခင်လေးကလဲအဒေါ်ကအိပ်ရင်သိုးနေတာ” “သိသွားမှာစိုးလို့ပါကိုမင်းရယ်” “ကိုယ့်အဒေါ်အကြောင်းကို ကိုမင်းအသိဆုံးပါခင်လေး”
“မဖြစ်ဘူးသိသွားရင်ခင်လေးပဲအရှက်ကွဲရမှာ”အင်း ဒီနေ့သူပြန်ရောက်လာပြီလေ၊သူပင်ပန်ပမ်းလို့ညကျနှိပ်ပေးဖို့ခေါ်ထားတယ်” “ဟုတ်လားခင်လေးရှိတာကို” “ခင်လေးကိုအားနာလို့ဖြစ်မယ်” “အင်းအဲဒါဖြစ်နိုင်တယ်” “ဒီလိုလုပ်လေ ခင်လေးဒေါ်လေးကိုညကျရင်ကိုမင်း လာနှိပ်ပေးမယ်၊ခင်လေးကလဲဒေါ်လေးကို ဆေးတိုက်လိုက်အိပ်ဆေးပါထည့်တိုက်လိုက်” “ဟွန်းဒါမျိုးဆိုတော်တော်ဉာဏ်ကောင်းနေတယ်” “ဟီး ခင်လေးကလဲ မနေ့ကခင်လေးခရီးပန်း နေလို့ကိုမင်းအလျှော့ပေးခဲ့တာ” “ဟွန်း..တော်ပါကိုမင်းရာအလျှော့မပေးရင် ခင်လေးသေသွားမလားမသိဘူး” “မသေစေရဘူးခင်လေး” “ဒီနေ့တော့မလာနှင့်အုံးလေ နောက်ရက်တွေမှပေါ့နှော်ကိုမင်း” “ဟုတ်ပါပြီ ခင်လေးရာ” ခင်လေးမှာကိုမင်းနှင့်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်လို့ရတော့မယ့်အခြေအနေမရှိတော့ပေ။ ခင်လေးလည်းမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးကိုမင်းလိုချင်တာပေးမလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့်အဒေါ်အိမ်မှာတော့လုပ်လို့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးလေ။လုပ်လို့သိသွားရင်အရှက်ကကွဲအုံးမှာခင်လေးကဘယ်မှာအေးအေးဆေးဆေးတွေ့လို့ရမလဲသာစဉ်းစားလိုက်တယ်။ ဆေးခန်းကဆောက်လို့ပြီးတော့မယ်။လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့စာရွတ်စာတန်းတွေပိုစတာတွေ၊ကြော်ငြာတွေနှင့်ဆေးတွေလိုအပ်သေးတယ်။ဒီတော့မြို့နယ်ကကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနခွဲကိုဖုန်းဆက်တော့လာထုတ်ပါတဲ့။မြို့ကိုတက်ပြီးပစ္စည်းထုတ်ဖို့ရာကိုမင်းကိုအကူအညီတောင်းရတော့တယ်။ “ကိုမင်း ခင်လေးမြို့တက်ပြီးပစ္စည်းထုတ်ရမယ်” “သွားလေခင်လေးဘယ်အချိန်သွားမလဲ” “မနက်ဖြန်မနက်စောစောသွားမယ်” “အင်းသွားကြတာပေါ့’” နောက်မနေ့မနက်ငါးနာရီလောက်ထိုးတော့ကိုမင်းကလာခေါ်တယ် “ခင်လေးနိူးပြီလား” “နိုးပြီလေ၊အဆင်သင့်ပဲ” ခင်လေး အပြင်ကိုထွက်ပြီးကိုမင်းဆိုင်ကယ်နောက်လိုက်ခဲ့တယ်။
ကိုမင်းလဲမြို့ဘက်မောင်းခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးရုံးဖက်လိုက်ပို့လိုက်တယ်။ကိုးနာရီခွဲလောက်ရောက်တာမို့အဆင်ပြေတယ်။ရုံးကထုတ်ပေးတာတွေကိုခင်လေးယူလာပြီး :”ကိုမင်းတစ်ခုခုစားရအောင်” “အင်းစားမယ်လေ၊ဒါပေမယ့်ဆိုက်မှာမစားချင်ဘူး” “အင်းအဲဒါဆိုလဲပါဆယ်ဝယ်လိုက်” ကိုမင်းခေါက်ဆွဲကြော်နှင့်ထမင်းကြော်နှစ်ပွဲဝယ်ကာမြို့ကအဆင့်မြင့်တည်းခိုခန်းကိုမောင်းခဲ့လိုက်တယ် “အယ် ကိုမင်း ဘယ်ကိုမောင်းလာတာလဲ” “ခင်လေးကလဲ၊ဟိုမှာကျတော့လည်းမတွေ့ရ ဘူးလေ၊အာ့ကြောင့်ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေး နေမလို့” “ဟွန်း ကိုမင်းနှော်” ကိုမင်းတည်းခိုခန်းဘက်မောင်းလာတော့ခင်လေးသိလိုက်ပြီ။ လုပ်ဖူးထားတော့ခင်လေးစိတ်ကမထူးတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလွမ်းမိုးနေတယ်။ရွာမှာလူသိမှာစိုးရိမ်ရပေမယ့်မြို့မှာဆိုတော့လူတွေမသိဘူးဆိုတဲ့အတွေးကဝင်လာတယ်။ကိုမင်းနှင့်အတူတည်းခိုခန်းထဲဝင်လိုက်တယ်။
“ခင်လေးအဝတ်အစားအပိုပါလား” “မပါဘူးကိုမင်း” ကိုမင်းခင်လေးကိုဖက်ပြီးနမ်းလိုက်တယ်။ ခင်လေးလည်း “ကိုမင်းအဝတ်တွေကြေကုန်ပါ့မယ်” “ကိုမင်းချွတ်ပေးမှာပေါ့” “ဟင်း..ဒါပဲအမြဲလာချောင်းနေတာ” ကိုမင်းခင်လေးအဝတ်တွေချွတ်ပေးလိုက်တယ်။အခုလိုမျိုးထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမှအရမ်းကိုလှတဲ့ဘော်ဒီ။နို့တွေလည်းဝိုင်းစက်လှပလွန်းတယ်ပန်းရောင်ပြေးနေတဲ့နို့လေးတွေကလဲမြင်သူငေးလောက်တယ်။ခါးသေးရင်ချီတဲ့အလှအပမျိုးလေးပေါ့။ ခါးသေးပြီးတင်ကြီးတဲ့မိန်းမသားအလှဆိုတာရှားပါးတယ်လေ။ “ခင်လေးရေချိုးခန်းဝင်လိုက်အုံးမယ်ကိုမင်း” ခင်လေးတမနက်လုံးလွုပ်ရှားနေတော့ညစ်ပတ်နေလောက်ပြီ။ကိုမင်းကတနေ့ကလိုမျိုးအဖုတ်ကိုနမ်းပေးရင်အနံ့ထွက်မှာစိုးရိမ်မိတယ်လေ။
ဒီတော့ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီးအဖုတ်လေးမွေးအောင်ဆပ်ပြာမွေးခဲလေးနှင့်ဆေးကြောလိုက်တယ်။ ကိုမင်းမှာခင်လေးရဲ့ဝတ်လစ်စလစ်အလှတွေ့ပြီးရင်ခုန်ပြီးလီးကအရမ်းတောင်လာတယ်။အမှတ်တရဖြစ်အောင်ခင်လေးမသိစေဘဲဗီဒီယိုရိုက်ဖို့လုပ်ပြီးဖုန်းကင်မရာကိုကုတင်ဖက်ချိတ်ပြီးဖွင့်ထားလိုက်တယ်။ ခင်လေးမှာအဖုတ်နှင့်ဖင်ကိုရေဆေးပြီးအိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်ခဲ့တယ်။ “လာ ခင်လေး ကိုမင်းအရမ်းလုပ်ချင်နေပြီ” “ဟင့် ကိုမင်းကလဲ” ခင်လေးနို့တွေကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး ခင်လေးနွုတ်ခမ်းတွေနမ်းလိုက်တယ်။ခင်လေးလဲ တုန့်ပြန်ကာနမ်းတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအနမ်းတွေက အရမ်းကိုထန်လွန်းနေတယ်။ ကိုမင်းကနမ်းရင်းနှင့် ခင်လေးဖင်ကြီးတွေကိုညှစ်သလိုခင်လေးကလည်းကိုမင်းကျောပြင်ကိုတင်းကြပ်စွာဖက်ထားတယ်။ကိုမင်းရဲ့လီးကခင်လေးပေါင်ကြားအဖုတ်နေရာကိုလာပြီးထောက်နေတယ်။ကိုမင်းလီးကအရည်တွေကစိမ့်ဆင်းနေတာကြောင့်ပေါင်ကြားမှာချောပြီးအဖုတ်အောက်ကိုထိုးမိနေပြီလေ။
ကိုမင်း ခင်လေးကိုဖက်ထားရင်းအိပ်ရာပေါ်လှချလိုက်ကာခင်လေးနို့တွေကိုရမက်ထန်ထန်နှင့်တပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက်တယ် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်”. “အာ့ အင်းးဟင်းးဟင်းးးး” တခါအလိုးခံထားတဲ့ခင်လေး အရသာကိုသိနေပြီတိုးတိတ်တိတ်ညည်းရင်း ကိုမင်းခေါင်းကဆံပင်တွေကိုဖွဖွလေးဆွဲနေမိတယ်။ကိုမင်းလည်း အဖုတ်ရှိရာကိုလျှောချရင်းခင်လေးပေါင်ကိုကားကာအဖုတ်ကိုယက်လိုက်တော့တယ် “ပလပ် ပလပ် ပလပ်” “အာ့ရှီးးရှီးးအိုးးးကိုမင်းးးဟားးးးးအားး” ခင်လေးအသံမထွက်စေဖို့ထိန်းချုပ်ပေမယ့် ကိုမင်းရဲ့လျှာအစွမ်းကြောင့်အလျှော့ပေးကာအသံထွက်ညည်းလိုက်တယ် “ပလပ် ပလပ် ပြွတ် ပြွတ်” အဖုတ်ယက်ပြီးအစေ့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်တယ်။စိတ်ထန်မွု့ကြောင့်မာနေတဲ့ခင်လေးအစေ့ကနီတျာရဲလေးဖြစ်နေပြီလေ။ “အာ့ကျွတ် ကျွတ် အိုးးအားးရှီးးရှီးးး” ခင်လေးခါးမြှောက်ပြီးအော်ညည်းလိုက်သလိုကိုမင်း ခေါင်းကိုလည်းဖိချမိတယ်။အထာပေါက်တဲ့ကိုမင်း အဖုတ်ထဲလျှာဝင်နိုင်သမျှဝင်အောင်ထိုးမွေပေးလိုကိတဲ့အခါ ခင်လေးမှာစိတ်ထန်ပြီး အဖုတ်ထဲကအရည်ထွက်ပြီးပြီးသွားရတော့တယ်။
“ပလပ် ပလပ် ပလပ်” “အားးရှီးးရှီးးးအားးးးးးအိုးးးအားးး” ညည်းသံဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ခင်လေးခါးကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးအသက်ရွူသံလေးပြင်းပြကာမောဟိုက်သွားတော့တယ် “ခင်လေးမောသွားပြီလား” “အင်း မော သွားပြီ” “ကိုမင်း ဟာလေး နမ်းပေးဦးလေ” “အင်း နမ်းပေးမယ်လေ” ခင်လေးကအိပ်ရာကလူးလဲထလိုက်သလို ကိုမင်းကအိပ်ရာပေါ်ပက်လက်အိပ်လိုက်တယ်။မိုးပေါ်ထောင်နေတဲ့ကိုမင်းလီးကိုခင်လေးကငုံကာစုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အားးရှီးးးကောင်းလိုက်တာ အိုးး” ခင်လေးရဲ့လီးစုပ်ပေးမွု့ကြောင့် ကိုမင်းမှာခြေဖဝါးကြောတွေထောင်ထသလိုဖြစ်သွားရပြီး လီးကအဆမတန်တောင်လာတော့တယ်။ ခင်လေးလဲ ကြားဖူးနားဝရှိသလို လီးဒစ်တွေကိုလျှာနှင့်ရစ်ပတ်ဆွဲလိုက်တော့ “အားးရှီးးးရှီးးးကောင်းလိုက်တာ ခင်လေးရာ” “တော်ပီ မလိုးရဘဲပြီးသွားလိမ့်မယ်” ကိုမင်း ပြောတာကြောင့် ခင်လေးလီးစုပ်တာရပ်လိုက်တော့တယ်။ “ခင်လေးကုန်းပေးပါလား” “အင်းကုန်းပေးမယ်လေ” ခင်လေးကကုန်းပေးလိုက်တယ်။
ကိုမင်းလည်း ခင်လေးနောက်ကနေပြီးအဖုတ်ကြားလီးတေ့ကာထိုးသွင်းလိုက်တယ်။လီးကတအိအိနှင့်ဝင်သွားပြီးအဆုံးထိရောက်သွားတော့တယ်။ “ဗျစ် ဗျစ် ဗြိ ဗြိဗျစ်” “အာ့ကိုမင်းဖြေးဖြေးအောင့်တယ်” “အင်းဖြေးဖြေးလေးလုပ်ကြည့်မယ်” ကိုမင်းလီးကိုဖြေးဖြေးချင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်လိုက်တယ်။ခနကြာတော့ခင်လေးဆီကထွက်တဲ့အရည်ကြောင့်ခင်လေးမှာအောင့်တာသက်သာလာသလိုဖြေးဖြေးချင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်တာလဲ အားမလိုအားမရဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ခင်လေးမြန်မြန်လုပ်ပေးဖို့ပြောမထွက်ပေ။ကိုမင်းလည်းအားမရဖြစ်လာကာ “ခင်လေး မြန်လို့ရပြီလား” “အင်းမြန်တော့ကိုမင်း ခင်လေးခံနိုင်ပြီ” ကိုမင်းအရှိန်လေးတင်ကာလိုးလိုက်တော့လီးကအဖုတ်ထဲတဇိဇိတဗျိဗျိ ဝင်ကာဖီးတက်လာတော့တယ်။ “ဇွိ ဗျိ ဗျစ် ဘွတ် ဘွတ် ဖန်းဖန်းးး” “အာ့ အင့် ဟင့် အင့် ” “ဗျစ် ဘွတ် ဖွတ်..ဖန်း..ဖန်းးး” “အိုး အင့်! ဟင့်! အင့်! အင့် အာ့ရှီးရှီးး” လိုးရတာစေးပိုင်နေသလိုအရမ်းလည်းကောင်းနေတယ်။
ကိုမင်းလိုးရင်း ခင်လေးဆံပင်တွေကိုစုစည်းကာနောက်ကိုလှန်ဆွဲလိုက်ပြီးတချက်ချင်းဆောင့်လိုက်တယ်။ကင်မရာမှာခင်လေးရဲ့ဖီးလ်တက်နေတဲ့မျက်နှာလေးပေါ်လွင်စေသလိုခါးလေးကော့ပြီးဖင်လေးထောင်နေနာကြောင့်ကိုမင်းလည်းအရသာရှိရှိလိုးရတော့ အရမ်းကောင်းလွန်းသလိုခင်လေးလည်းကာမစည်းစိမ်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိနေလို့လိုးသံတွေနှင့်ခင်လေးညည်းသံတွေကအခန်းတွင်းဆူညံလို့နေတယ်။ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်လိုးပြီးချိန်မှာတော့နှစ်ယောက်လုံးအထွဋ်အထိပ်ရောက်ကာပြီးချင်လာခဲ့တယ် “ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းးဖန်းးးးး” “အာ့ရှီးးရှီးးးအားးးးအင်းးး” “ခင်လေးပြီးတော့မလား” “အင်းးပြီး…ပြီးတော့မယ် အားးရှီးးးရှီးး” ကိုမင်းလည်းခင်လေးပြီးသွားတာသိလိုက်ပြီး သုတ်တွေပန်းထည့်လိုက်တော့တယ်။ “ကိုမင်းပြီးပြီလားး” “အင်းးပြီးပြီခင်လေး” “ဒါဆိုပြန်ကြမယ်၊နောက်ကျလို့မကောင်းဘူး” “အင်းပါနောက်အခေါက်ကျရင်ကြာကြာလေး လုပ်ချင်တယ်” “အင်းပါကိုမင်း၊ခင်လေးရေဆေးလိုက်အုံးမယ်” “ဆေးလေခင်လေး” ခင်လေးရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတော့ ကိုမင်းလည်းဖုန်းကိုယူကာပိတ်လိုက်တယ်။
ပြီးမှခင်လေးနောက်ကိုလိုက်ပြီးရေဆေးလိုက်တော့တယ်။ဒီလိုနဲ့မြို့တက်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုမင်းနှင့်ခင်လေးအမြဲတန်းလိုလို လိုးဖြစ်တော့တယ်။ ခြောက်လလောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်းရင်းခင်လေးမှာကိုမင်းရဲ့စရိုက်ကိုသိလာတယ်။ကိုမင်းက တကယ်ဆိုရင်စွန့်စားပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်ရမှာအခုတော့ဆယ်တန်းထိပဲကျောင်းတက်ဖူးပြီး အလုပ်မယ်မယ်ရရမရှိ။မိဘအလုပ်ကိုသာလုပ်ရင်းရွာမှာအေးဆေးစွာနေထိုင်တယ်။အားရင်ခင်လေးဆီလာတယ်။အိပ်စားကာမအဆင့်သာရှိတယ်လို့ဘဝနဲ့တွေးပြီးခင်လေးက မြင်လာတယ်။ခင်လေးတို့ရဲ့ဆေးခန်းလည်းပြီးစီးလို့ခင်လေးအိမ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ခင်လေးလည်းကိုမင်းကိုတဖြေးဖြေးနှင့်ဝေးလာတော့တယ်။ဆေးခန်းမှာလည်းနောက်ထပ်တစ်ယောက်ရောက်လာတဲ့အခါခင်လေးမှာအဖော်ရှိလာတော့ကိုမင်းကိုလည်း ရှောင်နေမိတယ်။ဒီလိုနှင့်တနေ့ကြတော့ရွာမှာအလွူတစ်ခုကခင်လေးကိုဖိတ်တယ်။
ခင်လေးနှင့်အဖော်အလွူကိုသွားကြတယ်။ အလွူကလဲရွာကမျက်နှာဖုံးဆိုတော့လူလည်းစည်တယ် “ဟေ့..မောင်လေး ဆရာမလေးတွေလာတယ်” “ဟုတ်မမကြီး” “ဆရာမလေးတွေလာဗျ။ထိုင်ကြပါ” “မောင်လေးရေ ဆရာမလေးတွေကိုဧည့်ခံလိုက်ဦး၊မမလာခဲ့မယ်”ခင်လေးကလာပြီးဧည့်ခံတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တော့ခင်လေးထက်သုံးနှစ်လောက်ကြီးမယ့်လူ ပါ။အသားညိုညိုနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာတောင့်တင်းတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ပေါ့” “ဆရာမလေးတို့စားကြပါ” “မမလည်းလာနေပြီ” “ဆရာမလေး စားနှော်အားမနာနှင့်၊ဒါကျမ မောင်လေးအငယ်ဆုံး” “ဟုတ်မမ ၊အရင်ကမတွေ့မိဘူးနှော်ရွာမှာ” “အခုမှနိုင်ငံခြားကပြန်လာတာကွယ်၊မသွားနဲ့အိမ်ကအလုပ်တွေလုပ်ပါဆိုတာမရဘူး၊သုံးနှစ်လောက်စင်ကာပူမှာလုပ်ပြီးပြန်လာတာ” “ကဲမောင်လေး၊သူကမခင်ခင်လေးတဲ့” “ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်ကကျော်ကျော်ထွန်းပါ” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်” “ကျနော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်” ကျော်ကျော်ထွန်းဆရာမလေးခင်ခင်လေးကို သဘောကျသွားတယ်။
အရမ်းလှလို့စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ခနခန ဆရာမလေးကိုချောင်းကြည့်မိတယ်။ခင်လေးမှာကိုကျော်ကျော်ထွန်းနှင့်အကြည့်ဆုံပြီးရင်ထဲတမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ “ခင်လေး ကျနော်တို့အိမ်ကိုလာလည်နိုင်ပါတယ်ဗျ” “ဟုတ် ကဲ့ကိုကျော်ကျော်ထွန်း ကျမတို့ဆေးခန်းဖက်လဲလာလည်နိုင်ပါတယ်” “လိုတာရှိရင်ပြောပါ။ကျနော်စွမ်းသလောက် ကူညီပါ့မယ်” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” ခင်လေးမှာကိုကျော်ကျော်ထွန်းရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အပြောနှင့်အပြုံးကိုသဘောကျသွားတယ် အကြည့်စူးစူးတွေကြောင့်ရင်ခုန်သလိုဖြစ်လာတယ်။ကိုမင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခံစားမွု့မျိုးမဟုတ်ဘဲထူးဆန်းတဲ့ခံစားမွု့မျိုးကိုကြုံရတယ် “အင်း ငါဘာလို့ဒီလိုတွေဖြစ်မိတာလဲမသိဘူး” စားသောက်ပြီး တော့ “ကိုကျော်ကျော်ထွန်း ကျမတို့ပြန်တော့မယ် ဆေးခန်းမှာလူမရှိလို့” “ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ” “မမ ညီမလေးတို့ပြန်တော့မယ်” “အေးကွယ် ဆရာမလေး” “မောင်လေးရေ အသီးအနှံတွေထည့်ပေးလိုက်ပါကွယ်” “မမရေ မယူတော့ဘူးလေ၊အလွူကြီးမှာ” “အေးကွယ် ညနေကျမှမောင်လေးကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတော့မယ်’”
“ရပါတယ်မမရဲ့” “အမလေးကွယ် အားနာစရာကျနေတာပဲ၊ကဲ ပြန်ပြန် နောက်ကျနေမယ်” ခင်လေးအလွူအိမ်ကပြန်လာလိုက်တယ်။ အပြန်လမ်းတစ်လျောက်ကိုကျော်ကျော်ထွန်းရဲ့မျက်နှာပဲမြင်ယောင်မိပြီးပြုံးမိတယ်။ “အမယ်ခင်လေးဘာတွေပြုံးနေတာ” “ဟုတ်ပါဘူး အမရယ်” “ဟင်းဟင်းးးငါသိပါတယ်အေ ၊ကိုကျော်ကျော်ထွန်းကြောင့်မလား” “အို အမကလဲ” “အင်း ခင်လေးခင်လေး ငရံ့နှစ်ကောင်ကြောင့်ဘယ်အကောင်ဖမ်းရမလဲစဉ်းစားရခက်နေပြီထင်တယ်” “အာအမရယ် အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး” ခင်လေးဘယ်လိုပင်ငြင်းပါစေ ခင်လေးဘာသာအသိဆုံးပါပဲ။ခင်လေးကိုကျော်ကျော်ထွန်းတို့ရဲ့မိသားစုအမူအကျင့်ကိုသိတယ်။အကယ်၍ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်ရင်ငြင်းရက်စရာ လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမယ့်အခုတော့ခင်လေးမှာ ကိုမင်းကရှိနေပြီ။ကိုမင်းလိုလူမျိုးနှင့်တော့အိမ်ကသဘောမတူဘူးလို့အရိပ်အမွတ်ပြောထားပြီးပြီ။ခင်လေးတွေးရင်ပြုံးလိုက်တယ် “မုန့်ဆီကြော်ကဘယ်နေမှန်းမသိဘူး၊နွုတ်ခမ်းနာနှင့်တည့်ပါ့မလားဆိုပြီးတော့လေ” ညနေရောက်တော့ကိုကျော်ကျော်ထွန်းရောက်လာတယ်။
“ခင်လေး ၊ ဟိုမှာကိုကျော်ကျော်ထွန်း” “အယ် ကိုကျော်ကျော်ထွန်းအားနာစရာရှင်” “အားနာစရာမလိုပါဘူးဗျာ၊ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလာချင်နေတာ” “ဟော့တော့” “မအံ့ဩနဲ့လေ ကျနော် ကခင်လေးမြင်ပြီးကတည်းကလာချင်နေတာ” “အော်ကိုကျော်ကျော်ထွန်းရယ်” “ရော့ အမပေးလိုက်တဲ့အသီးအနံတွေ လတ် ဆတ်တယ်ဗျ” “ကျေးဇူးပါရှင်” “လုပ်ပြန်ပြီ၊ကျနော်တို့ရွာကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မွု့တွေလုပ်ပေးတဲ့ခင်လေးကိုကျနော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာပါ” “အမယ်ကိုကျော်ကျော်ထွန်းအပြောကောင်းတယ်” “မကောင်းပါဘူးဗျာ” “ကျမဘာကျွေးရမလဲ၊အပြောကောင်းလွန်းလို့” “မလိုပါဘူးဗျာ၊ဒါပေမယ့်ဒီကိုခဏခဏတော့လာခွင့်ပေးပါ” “ရှင် ဘာလုပ်မို့လဲရှင့်” “ကျနော့်ရင်ထဲခံစားချက်တွေဖွင့်ပြမလို့” “အမ် ကိုကျော်ကျော်ထွန်းနှော်” “ဘာလဲခင်လေးက မယုံလို့လား၊လူကြီးစုံရာနှင့်လာတောင်းပြမယ်လေ” “ဟော့တော် ဒုက္ခပါပဲ” “ဘာမှဒုက္ခမရောက်စေရဘူး၊တောသားဆိုပေမယ့်အရည်အချင်းရှိပါတယ်။
ခင်လေးကိုဝမ်းဝရုံမကစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်တယ်” “ဟော့တော် ကိုကျော်ကျော်ထွန်းကြီးနှော်” “ဟုတ်တယ်ခင်လေးမြင်မြင်ချင်းချစ်တယ်ဆိုတာ ရူးတဲ့လူတွေလို့ထင်ခဲ့တာအခုကျနော်အရူးဖြစ်နေပြီ” “ခစ် ခစ် ခစ်” “ရယ်ပါဗျာ၊ရယ်ပါ။ ခင်လေးတစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနှင့်ရယ်နိုင်အောင်ခင်လေးကိုလက်ထပ်ချင်ပါတယ်” “ခင်လေးစဉ်းစားပါရစေ ကိုကျော်ကျော်ထွန်း” ခင်လေးမှာတကယ်တမ်းအချစ်ဆိုတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှားတစ် ခုကြောင့်ခင်လေးစိတ်ညစ်မိတယ်။တချိန်ကမတွေးမိဘဲကိုမင်းနှင့်သာယာခဲ့တာအမှားတစ်ခုလိုထင်နေရပြီလေ။ဆေးခန်းကထွက်သွားတဲ့ ကိုကျော်ကျော်ထွန်းကျောပြင်လေးကိုကြည့်ပြီးခင်လေးသက်ပြင်းချလိုက်တယ် “ဟူးး…ကိုကျော်ကျော်ထွန်းရယ်၊အစကသာတွေ့ခဲ့ရင် ခင်လေးရင်မောရမှာမဟုတ်ဘူး” ကိုကျော်ကျော်ထွန်းဆေးခန်းကထွက်သွားပြီး နောက်ကိုမင်းရောက်လာကာ “ကျော်ကျော်ထွန်းဘာလာလုပ်တာလဲခင်လေး” “အသီးအနှံတွေလာပို့တာ” “အော .”တချက်သာအသံထွက်လိုက်ပြီးကိုမင်း စဉ်းစားလိုက်တယ်။ပြီးမှ “ဘာတွေပြောသွားတာလဲ”ူး”ဘာမှမပြောဘူး” ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာမြွေမြွေချင်းခြေမြင်တယ်။
ဒီကောင်လိုလူမျိုးကစိတ်ထဲကမပါဘဲဒီလိုဆေးခန်းလာစရာမရှိဘူး၊။ငယ်ကတည်းကသိပြီးသားလေ။ကျော်ကျော်ထွန်းလိုလူမျိုးက ဘယ်မိန်းကလေးမှစိတ်ဝင်စားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။စီးပွားရေးပြေလည်ပေမယ့်ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ရပ်တည်မယ်ဆိုပြီး စင်ကာပူကိုထွက်သွားတာ။ အခုဆေးခန်းကိုလာတယ်ဆိုတော့ခင်လေးကိုဒီကောင်ကြိုက်လို့ဖြစ်မယ် “ခင်လေးညနေဘာစားမလဲ” “အားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီ” “ဒီညလာတွေ့လို့ရမလား” “မရဘူးဆို” “ခင်လေးရယ် ကိုမင်းအရမ်းတွေ့ချင်နေတာ” “ကိုမင်းရယ်ခင်လေးဘက်လဲကြည့်အုံးလေ” “ဟင်းးး ခင်လေးရယ်၊ကိုမင်းစိတ်မချဘူးကွာ” “အမ် ကိုမင်းနှော် ပြန်တော့ခင်လေးလုပ်စရာရှိသေးတယ်” ကိုမင်းအနှင်ခံရတော့စိတ်ခုသွားတယ်။ အမှန်ကခါတိုင်းလဲဒီလိုပါဘဲ။ဒါပေမယ့်ကျော်ကျော်ထွန်းလာပြီးကတည်းက ကိုမင်းစိတ်တွေတိုနေမိတယ်။ဆက်ပြောရင်စိတ်တိုရမှာမို့ကိုမင်းအိမ်ပြန်လိုက်တယ်။
ခင်လေးလဲကိုမင်း ပြန်သွားတော့သက်ပြင်းလေးချလိုက်မိတယ်။ ဖုန်းမည်သံကြားလို့ ခင်လေးထကိုင်လိုက်တော့ကျန်းမာရေးရုံးက “ဆရာမ ခင်လေး” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “ဆရာမလေးမြို့ကိုပြောင်းရမယ်” “ရှင်” “ဟုတ်တယ်ဗျ၊အော်ဒါထွက်နေပြီ” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” ခင်လေးထွက်ပေါက်တစ်ခုရသလိုခံစားရပြီး ပျော်သွားတယ်။မနက်မိုးလင်းတော့ရွာကလူတွေကိုနွုတ်ဆက်တယ်။အားလုံးကမြို့ပေါ်ပြောင်းရတော့စိတ်မကောင်းကြပေမယ့်တွေ့လို့ရနေတာမို့အဆင်ပြေသေးတယ်ဆိုပြီးလိုက်ပို့ကြတယ်။ကိုမင်းကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပါတယ်။မြို့ရောက်တော့ကိုကျော်ကျော်ထွန်းဖုန်းဆက်တယ် “ခင်လေး” “ရှင် ကိုကျော်ကျော်ထွန်း” “ကျနော်မှာခင်လေးနဲ့တွေ့လို့ပျော်ရုံပဲရှိသေးတယ်ခင်လေးကပြောင်းရပြီဆိုတော့ကျနော့် ရွာမှာမပျော်ဘူးဗျာ” “အော်ကိုကျော်ကျော်ထွန်းရယ်” “ကျနော်ခင်လေးကိုချစ်တယ်ဗျာ” “ခင်လေးသိပါတယ်” “ခင်လေး ကျနော်ကိုလက်ထပ်ပါလားဗျာ” “ဟင်း ကိုကျော်ကျော်ထွန်းရယ်” ” ကျမ..မိဘတွေကိုပြောရအုံးမယ်၊ သူတို့သဘောတူမှဖြစ်မှာပါ”
“ဟာဒီလိုဆို ခင်လေးကျနော့်မမကိုအဲဒီလွတ်ပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြခိုင်းလိုက်မယ်ဗျာ” “ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကျော်ထွန်း” “ကျနော်အရမ်းပျော်သွားပြီဗျာ၊မနက်ဖြန်ခင်လေးဆီလာခဲ့မယ်” “ဟုတ် ကဲ့” ကျော်ကျော်ထွန်းကသူ့အမကြီးကိုပြောတော့ “ငါ့မောင် မမကြီးကမိန်းကလေးချင်း ကိုယ်ချင်းစာလို့သိပ်မပြောချင်ဘူး” “ဘာဖြစ်လို့လဲမမ” “ဘာဖြစ်ရမလဲ မင်းမင်းနဲ့သူသမီးရည်းစား ဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းကြားတယ်’ “မမကလည်းဗျာ၊ခုခေတ်မှာသမီးရည်းစားတွေဘာတွေကအရေးမကြီးဘူးလေ” “ငါ့မောင်…အိမ်ထောင်ပြု၊ဘုရားတည်၊ဆေးမှင်ရည်စုတ်ထိုး၊ချက်မပိုင်ပြင်ရခက်သည့်အမျိုးတဲ့။မောင်လေးသတိထားရမှာနှော် နောင်ပေါ်လာမယ့်ပြသနာအတွက်မောင်လေးစဉ်းစားအုံး” “မမရယ် လူတိုင်းကခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်ဆိုတာမရှိဘူး၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်ချစ်လို့လက်ထပ်မှာပါ” “အေးပါ မမသတင်းမေးမြန်းကြည့်ပါမယ်” မောင်ကိုချစ်သည့်အမမို့မောင်ပြောသလိုပဲ ခင်လေးတို့ရွာကိုခရီးထွက်သွားတယ်။
ကိုမင်းတို့ရွာဆိုတာတစ်ဦးကတစ်ခုခုလုပ်ရင် တဦးကသိနေတော့ ကိုမင်းစိတ်ထဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ရပြီ။ ရည်းစားလူလုအူနုကျွဲခတ်ဆိုသလိုပါပဲ။ကျော်ကျော်ထွန်းဆီသွားလိုက်ပြီး “ကျော်ကျော်” “ဘာလဲမင်းမင်း” “အေး ငါနှင့်ခင်လေးကသမီးရည်းစားဖြစ်ခဲ့တယ်နှော်” “အေးဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲကွာ၊ငါလက်ထက်မဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲ” “မင်းစဉ်းစားလေ ငါထက်သာတဲ့မင်းနှင့်တွေ့တော့ငါ့ကိုပစ်ပြီးမင်းနောက်လိုက်တာ။ဘယ်မှာလဲသစ္စာ” “အင်း..လေ သူလဲသူ့အကြောင်းတရားနှင့်သူမို့လို့လေ” “အေးမင်းကို ငါမပြောမရှိနှင့်။တစ်ရွာတည်းသားမို့ပြောပြတာ” “အေးငါသိပြီးပြီ” “ငါနှင့်ဘယ်အဆင့်ထိရောက်ခဲ့လဲမင်းသိလား” “ဒါတွေငါသိစရာမလိုဘူး၊ငါနှင့်လက်ထပ်ပြီး ငါကြည်ဖြူရင်ပြီးတာပဲ” “အေးပါကွာ၊မင်းသိအောင်ငါလာပြောတာပါ” “အေးပါကျေးဇူးပဲ” ကိုမင်း ကျော်ကျော်ထွန်းကိုအံ့ဩသင့်သွားတယ်။ဒီလောက်ထိရူးလိမ့်မယ်လို့ မထင်မှတ်ခဲ့ဘူး။
သူ့ထိုက်နှင့်သူ့ကံလို့ပဲတွေးလိုက်တော့တယ်။ ကျော်ကျော်ထွန်း ခင်လေးပိတ်ရက်မို့ဆီသွားလိုက်တယ်။ “လာလေ ကိုကျော်ကျော်” “အင်း ခင်လေးနှင့်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောချင်တယ်” “ပြောလေ ကိုကျော်” “ကိုကျော့်သူငယ်ချင်းအိမ်ကိုသွားမယ်” “အင်း လိုက်ခဲ့မယ်ကိုကျော်” ကျော်ကျော်ထွန်းခင်လေးနှင့်စကားကိုလွတ်လပ်စွာပြောဖို့ရာသူငယ်ချင်းအိမ်ခေါ်ခဲ့တယ် “ဟေ့ကောင်ကျော်ကြီးအခုမှလာတယ်” “အေးကွာ ဒါ ငါယူမယ့်မိန်းကလေးခင်လေးတဲ့” “အော မခင်လေးဘာမှအားမနာနှင့်ဒီကောင်နဲ့ကငယ်သူငယ်ချင်းတွေ၊အခုကဒီအိမ်မှာကျနော်တစ်ယောက်တည်းအေးဆေးနေ” “ဟေ့ကောင်ကျော်ကြီးငါအပြင်လစ်မယ်၊မင်းပြန်ခါနီးမှဖုန်းဆက်တော့” “အိုကေ သူငယ်ချင်း” ကျော်ကျော်ထွန်းသူငယ်ချင်းအပြင်ရှောင်ထွက်သွားမှ “ခင်လေး ကိုမေးစရာရှိတယ်” “မေးလေ ကိုကျော်” “ခင်လေးကိုယ့်ကိုချစ်လား” “ဘာလို့ဒီစကားမေးတာလဲကိုကျော်” “အကြောင်းရှိလို့” “အင်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်၊ခင်လေးကို ကျော်နှင့်လက်ထပ်ဖို့အထိတွေးထားတာ၊ကိုကျော့်ကိုချစ်မိလို့ပဲ”
“ခင်လေးကိုကျနော်ချစ်တယ်” “ဟုတ်ကဲ့” “ခင်လေးချစ်တယ်လို့ဖြေပေးလေ” “ဟုတ်ပါပြီရှင် ကျမလဲရှင့်ကိုချစ်ပါတယ်” “ခင်လေးကို ပြောစရာရှိတာကခင်လေးဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ကျနော်ကြည်ဖြူတယ်” “အင်း ကိုကျော် ခင်လေးကိုမေးချင်တာတွေ ရှိတယ်မလား” “အင်း ” “ခင်လေးသိပါတယ်” “အင်းပြောပြလို့ရမလား” “ခင်လေး ကိုမင်းမင်းနှင့်ညိစွန်းခဲ့တယ်” “အင်း ရပြီခင်လေးရပြီ” “ကိုကျော့်အချစ်ကို ယုံတယ်မလား” “အင်းယုံတယ်လေ” “အင်းကိုယ်လေးခင်လေးကိုလည်းယုံပါတယ်” “ဟုတ်ကိုကျော်” “ခင်လေးအရမ်းချစ်တယ်ကွာ” ကိုကျော် ခင်လေးကိုဖက်ပြီးနမ်းလိုက်တော့။ ခင်လေးလဲပြန်နမ်းလိုက်တယ်။ခင်လေး မှာကျော်ကျော်ထွန်းအနမ်းတွေတုန့်ပြန်ရင်း ကျေနပ်မိတယ်။တဘဝစာအားကိုးရမယ့်လူ မိမိချစ်ရတဲ့သူ၊မိမိအပေါ်နားလည်ခွင့်လွတ်ပြီးချစ်ရမယ့်သူဆိုတာမို့ခင်လေးအရမ်းပဲကျေနပ်မိတယ်။ကျော်ကျော်ထွန်းခင်လေးကိုအရမ်းချစ်တယ်။တူနှစ်ကိုယ်သစ္စာပြိုင်ဆိုလိုက်ချင်သေးတယ်။မင်းမင်းကခင်လေးအနားကပ်မရတော့အောင် ခင်လေးကိုအနိုင်ယူခဲ့ချင်တာကြောင့်ချစ်လေးကို လိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ခင်လေးအင်္ကျီကိုအသာအယာလေးချွတ်လိုက်ပြီးခင်လေးဘရာကိုပါချွတ်ယူချလိုက်ပြီးဝိုင်းစက်ပြီးအလွန်လှတဲ့ခင်လေးရဲ့နို့တွေကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့ လိုက်တယ်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့ရှီး ကိုကို အင်း..ဟင်းးဟင်းးး” ခင်လေးစိတ်တွေထကြွနေပြီ။ဒီတစ်ခါ ကိုကိုလိုးရမယ့်အရေးကစိတ်ချလုံခြုံသလိုခံစားနေရတယ်။
စိတ်လဲရဲမိတယ်။နို့ချိုချိုတွေကိုစို့နေတဲ့ကိုကိုကြောင့် စိတ်ထိန်းမထားပဲညည်းတွားမိလိုက်တယ်။ကိုကျော်လည်း ခင်လေးရဲနို့ထွားထွားတွေကို စို့ရင်းလက်ကစောက်ဖုတ်မွေးတွေကိုဖွဖွလေး ဆွဲလိုက်တယ်။ “အာ့ ကို ကို အင်းးးဟင်းးး”နာကျင်မွူ့လေးနှင့်အတူကာမစိတ်တွေတအားတိုးပြီးကိုကို့လည်းပင်းကိုခင်လေးဆွဲဖက်လိုက်သလိုပိပိထဲအရည်တွေစီးဆင်းသွားရပြန်တယ်။ကျော်ကျော်ထွန်းလည်းခင်လေးစောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းထဲအရည်ကိုလက်နှင့်ကလော်ကာအစေ့ကလေးကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ် “အာ့ရျီးးးရှီး အိုး ကိုကိုရယ် ” တစတစတိုးပွားနေတဲ့ကာမစိတ်ကြောင့်ခင်လေးညည်းသံပိုထွက်လာတယ်။အစေ့ကိုပွတ်ခံရတဲ့ခင်လေးနေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေပြီးပြီးထျင်စိတ်တွေဖြစ်နေပြီ။အလိုးခဲချင်နေပြီ။
ကျော်ကျော်ထွန်းခင်လေးစောက်ဖုတ်ကိုအားရပါးရနမ်းရှိုက်လိုက်ပြီးစောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျောက်လျှာကိုအပြားလိုက်လုပ်ကာယက်လိုက်တယ်။ “ပလပ် ပလပ် ပလပ်” “အားးရှီးးးအိုး ကိုကို မလုပ်နဲ့ အားး”ကြိုက်ပေမယ့်ဟန်ဆောင်ပြီးတားလိုက်တယ်။ ကျော်ကျော်ထွန်းကတော့ခင်လေးအပေါ်မှာမင်းမင်းထက်ငါပိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာသက်သေပြရအောင် ကြိုးစားပြီးတတ်ကျွမ်းသမျှကာမပညာကိုအသုံးချကာလျှာကိုစုချွန်ပြီးထိုးမွေလိုက်တယ်။ပြီးမှအစေ့ကလေးကိုတပြွတ်ပြွတ်စုပ်တယ် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့ရှီးးရှီးးးရှီးးအိုးး ကိုကိုအိုးးးးးအားးရှီးး” အစေ့ကလေးစုပ်ရင်းစောက်ဖြတ်ကိုလက်ခလယ်နှင့်အဝင်အထွက်ကြမ်းကြမ်းလုပ်လိုက်တယ်။
ခင်လေးလည်းကာမစိတ်တွေအရမ်းကြွလာကာခါးလေးကိုလေပေါ်မြှောက်ပြီးအရသာယူလိုက်တယ်။ကိုကိုရဲ့စုပ်ပေးယက်ပေးမွု့ကြောင့်ခင်လေးကြာကြာမထိန်းနိုင်တော့ပဲခင်လေးမှာ ပြီးသွားရတော့တယ်။ “ခင်လေးကိုကိုလိုးချင်နေပြီ” “ကိုကို့သဘောပါ ကိုကို” “ကိုကို့သဘောဆိုရင်ကိုကိုလီးစုပ်ခိုင်းလို့ရမလားဟင်ခင်လေး ကိုကိုလဲလီးစုပ်ခံချင်တယ်” “ကိုကိုလုပ်ပေးပါဆိုရင်ခင်လေးအသင့်ပါပဲကိုကို” “အင်းဒါဆို ကိုကိုလီးစုပ်ပေး” ကျော်ကျော်ထွန်းမတ်တပ်ရပ်ကလေးနှင့်နေပေးတော့ခင်လေးကိုကိုနားဒူးထောက်လိုက်ကာကိုကိုလီးကိုစုပ်လိုက်တယ် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အားးးးးရှီးးးအိုးးကောင်းလိုက်တာခင်လေးရာ” အတွေ့အကြုံရှိးပြီးသားမို့ခင်လေးအတွက်မခက်ခဲလှဘူး။လီးကိုအဆုံးထိဝင်နိုင်သမျှဝင်အောင်သဒ္ဓါပိုစွာလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ခင်လေးလီးစုပ်ချက်ကြောင့်စိတ်ပါနေတဲ့ကျော်ကျော်ထွန်းပြီးမသွားရအောင်စိတ်အာရုံကိုတနေရာပို့လိုက်ရတယ်။
လီးထိပ်ဝလေးတွေကိုလျှာဖျားလေးနှင့်ထိုးဆွပေးတော့ ကျော်ကျော်ထွန်း ရင်တွေတသိန့်သိမ့်တုန်စေတယ်။လီးဒစ်ကြီးကိုလျှာဖျားနှင့်ရစ်ပတ်ဆွဲရုံမက လီးအရင်းကိုပါလျှာနှင့်ယက်လိုက်သေးတယ်။ဂွေးဥလေးကိုပါမနာမကျင်စေပဲလပ်နှင့်ညှစ်ပေးပြီးစုပ်ဆွဲလိုက်ရာ “အားးရှီးးးရှီးးးအိုးးခင်လေးကိုကို မရတော့ဘူးပြီးသွားမယ်” “ဟုတ်ကိုကို” “ခင်လေးကိုလိုးချင်နေပြီ” ”ကိုကိုသေဘာပါကိုကို” “လာခင်လေးကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှန်လိုက်ကိုကိုအောက်ကနေမတ်တပ်လိုးမယ်” ခင်လေးကိုကိုပြောသလိုကုတင်ပေါ်ထိုင်နေရာကကုတင်အောက်ခြေဆင်းလိုက်ပြီးပက်လက်လှန်ချလိုက်တယ်။ကျော်ကျော်ထွန်းလဲကုတင်အောက်ကနေပြီးခင်လေးပေါင်ကိုတွန်းတင်ကာစောက်ဖုတ်ထဲလီးတေ့ပြီးလိုးလိုက်ကာ ခင်လေးပေါင်နှစ်ချောင်းကိုပုခုံးပေါ်တင်ပြီး တဖတ်ဖတ်လိုးလိုက်ရာလီးကလည်းအတားအဆီးမရှိပေမယ့်ကြပ်တည်းပြီးတဇွိဇွိ တဖွတ်ဖွတ်ဝင်သွားတော့တယ် “ဗျစ် ဘွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်” ‘”အာ့ရှီးးအိုးးအင်းးဟင်းးးဟင်းး” “ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းးဖန်းးဖန်းးးဖန်းးး” “အာ့ အိုးးအားးးရှီးးရှီးးးးအိုးး” ကိုမင်းနှင့်လိုးရတာနှင့်မတူသောအရာတမျိုးကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဂွေးဥကတဖတ်ဖတ်နှင့်ခင်လေးဖင်ကိုရိုက်မိနေတယ်။
ခံစားရတဲ့အထိအတွေ့ကြောင့်ခင်လေးလည်းအရမ်းအရသာရှိနေတယ်။ကျော်ကျော်ထွန်းလည်းခင်လေးစောက်ဖုတ်လိုးရသဖြင့်စိတ်တွေအရမ်းကြွကာနည်းနည်းကြမ်းပြီးလိုးလိုက်တယ်။ထိန်းထားတဲ့စိတ်တွေကိုလွတ်လိုက်မိသဖြင့်ဆယ်မိနစ်လောက်လိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ “အားးရှီးးရှိးးးအိုးးးအားးး” ခင်လေးစောက်ဖုတ်ရဲ့ညှစ်အားကိုခံစားလာရပြီးခင်လေးပြီးတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျော်ကျော်ထွန်းလဲသုတ်မထိန်းပဲလိုးလိုက်ရာနှစ်ယောက်သားပြိုင်တူပြီးသွားတော့တယ်။ ခင်လေးစောက်ဖုတ်ထဲလီးရည်နွေးနွေးတွေဝင်ရောက်သွားတော့ကိုကိုပြီးသွားမှန်း ခင်လေးသိလိုက်တယ်။ “ကိုကို ပြီးသွားပြီလား” “အင်း ခင်လေး” “ခင်လေးအိပ်ထဲကတစ်ရွူးလေးပေးပါကိုကို” ကျော်ကျော်ထွန်းလဲခင်လေးအိပ်ထဲကတစ်ရွူး စက္ကူလေးယူပေးလိုက်တယ်။ခင်လေးကတစ်ရွူးစယူပြီးစောက်ဖုတ်ကိုသုတ်တယ်ပြီးမှ “ကိုကိုလာလေ ညစ်ပတ်နေပြီခင်လေးသုတ် ပေးမယ်”ကျော်ကျော်ထွန်းလဲခင်လေးအနားကပ်ပေးလိုက်တော့ခင်လေးကလီးကိုယုယစွာသန့်ရှင်းပေးလိုက်တယ်။
“ပြီးပြီ ကိုကို” ခင်လေးကမော့ပြီးပြောတော့ကျော်ကျော်ထွန်းလဲခင်လေးနဖူးလေးအားနမ်းလိုက်ပြီးဖက်ထားလိုက်တယ် “ကိုကို တော်ပြီကွာ၊ကိုကိုသူငယ်ချင်းအားနာစရာ” “အင်းပါခင်လေးရာ၊အိမ်သာသွားမလား” “အင်းကိုကို” ခင်လေးကိုအိမ်သာဖက်ခေါ်ပြီးသွားခိုင်းလိုက်တယ်။ခင်လေးလဲစောက်ဖုတ်နှင့်ဖင်ကိုရေဆေးပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ကာထွက်ခဲ့တယ်။ အဝတ်အစားတွေပြန်ဝတ်ပြီးကျော်ကျော်ထွန်းသူငယ်ချင်းကိုဖုန်းဆက်တော့သူငယ်ချင်းက ဆိုင်မှာဝင်ပေးပါဆိုလို့သော့ဝင်ပေးပြီးခင်လေးကိုလိုက်ပို့လိုက်တယ်။ ခင်လေးတို့ဘဝရှေ့ဆက်လျောက်ဖို့ရာအဆင်ပြေနေပြီ။ခင်လေးမိဘကိုသွားပြောတဲ့မမကြီးက ခင်လေးကိုတင်တောင်းဖို့ရာလယ်ဧကသုံးဆယ်၊ထွန်စက်နှစ်စီး၊ခင်လေးအတွက်ရွေတဆင်စာအပြင်သိန်းတစ်ရာလက်ဖွဲ့ဖို့ပြောကြားတော့ခင်လေးမိဘကချက်ချင်းသဘောတူလိုက်ပြီးရက်ကောင်းရွေးခဲ့တယ်။ခင်လေးနှင့်ကျော်ကျော်ထွန်းမှာအရမ်းဝမ်းသာပြီးမင်္ဂလာဆောင်ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတော့တယ်။ မင်္ဂလာဖိတ်စာတွေရိုက်ပြီး၊ဝေငှတော့မှ မင်းမင်း ဒေါသထွက်တော့တယ်။ “တောက် ကွာ ငါဒီလောက်ပြောထားရက်နဲ့” ကျော်ကျော်ထွန်းအပေါ်မှာလည်းဒေါသထွက်သလို ခင်လေးအပေါ်လည်းနာကျည်းမိတယ်။
ခင်လေးရှိရာမြို့ပေါ်သွားတော့ ခင်လေးခွင့်ယူပြီးမြို့ပြန်သွားတယ်။ဓလေ့ထုံးစံအရခင်လေးအိမ်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပြီး သတို့သားကရွာကနေသတို့သမီးအိမ်ကိုသွားရောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်လေးကကြိုပြီး ခွင့်ယူသွားခဲ့တာ။ခင်လေးကိုဖုန်းဆက်တော့လည်းခင်လေးကမကိုင်တော့ပါ။မင်္ဂလာရက်နီးလေကျော်ကျော်ထွန်းတို့အိမ်ကလူစည်လေ မင်းမင်းစိတ်ထဲမခံချိမခံသာဖြစ်လေနှင့်မို့ မင်းမင်းကနှစ်ယောက်လုံးအရှက်ရစေဖို့ကြံစည်လိုက်တော့တယ်။ မင်္ဂလာအခါပေးအသံချဲ့စက်တွေကားပေါ်တင်ပြီးခင်လေးတို့မြို့ဘက်ကို ကားတွေတသီတသန်းကြီးထွက်တော့မှ မင်းမင်းပြုံးလိုက်ကာ “သောက်ရှက်မရှိတဲ့ကောင်နှင့်ငွေမက်တဲ့မိန်းမ နင်တို့သောက်ရှက်ကွဲပြီ”ဆိုပြီး Fbပေါ်မှာခင်လေးနှင့်မင်းမင်းလိုးခဲ့ကြတဲ့မူဗီဖိုင်ကိုတင်လိုက်တယ်။
မင်္ဂလာပွဲကရွာရဲ့မျက်နှာဖုံးဆိုတော့လူစည်တယ်။Fbပေါ်မှာ ပုံတင်ရန်အတွက်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြlive လွင့်ကြရင်းနှင်း မင်းမင်းရဲ့ Postနှင့်မူဗီကတက်လာတယ်။တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ပြောရင်းကကျော်ကျော်ထွန်းအမကြီးသိသွားတဲ့အခါ “မောင်လေး ကျော်ကျော်” “ဗျာ မမ ဘယ်လိုလုပ်မလဲမောင်လေး” “ကျနော် ဘာပြောရမလဲမမရယ်” “မောင်လေး မမကသိပြီးသားပါ၊ဒါပေမယ့် သိသာသိစေ လူမမြင်စေနှင့်တဲ့၊အခုတော့မမ လေ မောင်လေးနှင့်ခင်လေးကိုသဘောမတူ တော့ဘူး” “ဟုတ်ကဲ့မမ ကျနော်သိပါတယ်။ကျနော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအရ၊ခင်လေးကိုကျနော်ချစ်ပေမယ့်စွန့်လွတ်လိုက်မယ်မမ” “အင်းဟုတ်ပြီ၊ဒီတော့မောင်လေးပြန်တော့ ကျန်တာမမစီစဉ်လိုက်ပါ့မယ်” “ဟုတ်ကဲ့မမ” “အားလုံးပြန်လှည့်တော့” “ဟုတ်ကဲ့” အားလုံးကစိတ်မကောင်းသလို မင်းမင်းအပေါ်လည်းဒေါသထွက်ကြတယ်။
ခင်လေးကိုလဲ မုန်းကြတယ်။ကျော်ကျော်ထွန်းကိုအားပေးရင်းရွာကိုပြန်လှည့်ကာသွားကြတယ်။ကျော်ကျော်ထွန်းအမက ခင်လေးဆီဖုန်းဆက်လိုက်တယ် “ဟလို ” “ဟုတ်ကဲ့မမ ခင်လေးပါ” “ခင်လေး မမပြောမယ်၊ခင်လေးခဏနားထောင်” “ဟုတ်ကဲ့မမ” “အခုမင်္ဂလာပွဲပျက်ပြီခင်လေး” “ရှင်! မမ၊ဘာ ဘာ ဖြစ်လို့လဲမမ” “ခင်လေး မင်းမင်းက ခင်လေးနှင့်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်ပြီခင်လေး၊မမက သိပေမယ့်မောင်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးခင်လေးနှင့်လက်ထပ်ပေးချင်ခဲ့တာ၊အခုလိုတနိုင်ငံလုံးသိပြီးတော့ ကိုယ့်မောင်လေးနွားကျခံနေရမယ့်အဖြစ်ကိုမမမခံနိုင်ဘူး၊ဒီတော့ခင်လေးမမကိုနားလည်ပေးပါ၊ခင်လေးနှင့်မမတို့ရေစက်ကဟီလောက်ပဲပါတယ် မှတ်လိုက်တော့” “ခင်လေးသဘောပေါက်လိုက်ပြီ အစစအရာရာကိုသတိမထားပဲကာမအလိုလိုက်ကာ မင်းမင်းကိုခွင့်ပြုခဲ့လို့ ခင်လေးဘဝအမည်းစက်တွေနှင့်မိဘတွေလည်းသူများတံတွေးခွက်ပက်လက်မျောရတော့မယ်။ခင်လေးအရမ်းရှက်တယ်။မင်္ဂလာဝတ်စုံပေါ်ခင်လေးမျက်ရည်စက်တွေတစက်စက်ကျလာတယ်။ခင်လေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်။အဲဒါကတော့လူ့လောကကိုစွန့်လွတ်ဖို့ပါပဲ …………ျပီးပျါပီ။